အပေးအယူမျှ – Grab Love Story
ညလေပြေညှင်းက ဖြူငယ့်ဆံနွယ်ပျော့ပျော့များကို တိုးဝှေ့ဆော့ကစားသောအခါ ရှုပ်ထွေးနေသော စိတ်များ အနည်းငယ်ပြန်ကြည်လင်လာရသည်။ ဖြူငယ့်ပထမနှစ်စာမေးပွဲက နီးနေပြီ။ အခန်းအောင်းပြီး တချိန်လုံး စာ ကြည့်နေရသဖြင့် ခေါင်းတွေမူးကာ မကြည်မလင်ဖြစ်နေသော စိတ်များဖြေလျှော့ရန် ၀ရံတာသို့ထွက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ “ ဖြူလေး မအိပ်သေးဘူးလား“ “ဟင်“ ရုတ်တရက်အနီးကပ်ကြားလိုက်ရသောအသံကြောင့် ဖြူငယ်လန့်ဖြန့်ကာ ကိုယ်လုံးလေးပင် တုန်တက်သွားရသည်။ “ကိုကြီး မင်းသစ် ဖြူစာကျက်ရင်းခေါင်းမူးလာလို့ ခနထွက်လာတာ“ “ညဉ့်နက်နေပြီ ဖြူလေးရဲ့ စာကိုနားနားနေနေလုပ်မှပေါ့“ ဖြူငယ့်တစ်ကိုယ်လုံးကိုသိမ်းကျုံးစိုက်ကြည့်နေသောမျက်ဝန်းများကြောင့် ပါးပြင်တွင်ရှက်သွေးလေးများ ဖြန်းခနဲနေအောင်ထသွားရသည်။ ပါးလျသောညအိပ်ဂါဝန်ဖြူဖြူလေးအောက်တွင် ဖြူငယ်ဘာမှ ခံမ၀တ်ထားမိပါ။ ဒီအချိန်အိမ်သားအားလုံးအိပ်လောက်ပြီ အထင်နှင့် အခန်းထဲမှထွက်ခါ ၀ရံတာဘက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ “ဖြူ သွားအိပ်တော့မယ် ကိုကြီး “ “အေးအေး ကိုကြီးလည်း အပေါ်ထပ်မီးပိတ်ဖို့ ထွက်လာတာ ဖြူလေးဝင်ပြီးမှပိတ်မယ် သွားသွား“ ဖြူငယ် မင်းသစ်ရှေ့ကသုတ်သုတ်လေးပင်ထွက်လာခဲ့သည်။ သူမအခန်းနှင့် မင်းသစ်အခန်းကကပ်လျက်။ သူမအခန်း မရောက်မှင်္ီ မင်းသစ်အခန်းရှေ့မှာပင် ရုတ်တရက် မီးကပျက်သွားလေသည်။ “အမလေး “ ရုတ်တရက်ပိန်းပိတ်အောင်မှောင်သွားသဖြင့် ဖြူငယ်လန့်သွားရသည်။ သူမကအမှောင်ကိုကြောက်သည်လေ။ “ဖြူလေး မကြောက်နဲ့ကိုကြီးရှိတယ်“ အမှောင်ထဲဝယ် ရုတ်တရက် ကိုယ်ကိုနောက်ပြန်လှည့်မိတော့ မင်းသစ်ကိုယ်လုံးနဲ့ ၀င်တိုက်မိကာ ဖြူငယ့်တစ်ကိုယ်လုံး မင်းသစ်ရင်ခွင်ထဲရောက်သွားရသည်။ မင်းသစ်က ဆွဲဖက်ထားလိုက်သည်ကိုး။ “အဲ့ ကိုကြီး “ ဖြူငယ့်ကိုယ်လုံးထွေးထွေးအိအိလေး ရင်ခွင်ထဲရောက်လာသောအခါ မင်းသစ်စိတ်မထိန်းနိုင်ဘဲ ပါးပြင်ရှိမည် ထင်သော နေရာကို စမ်းကာအနမ်းချွေလိုက်မိသည်။ သို့သော် မင်းသစ်၏နှုတ်ခမ်းများနှင့် ထိစပ်မိသော နေရာမှာ ဖြူငယ့်ပါးပြင်မဟုတ်ဘဲ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေး ဖြစ်နေကြောင်းသိလိုက်ရပြီးနောက် မင်းသစ်ပိုရွေ့ပင် နောက်မဆုတ်ချင်တော့။ ဖြူငယ်ကလည်း သူ့အနမ်းတွေကို ငြိမ်သက်စွာခံယူနေသည်။
ဖြူငယ့်ကိုယ်လုံးလေးကို ထွေးပိုက်ထားရင်း မင်းသစ်လက်များက ပါးလွှာသောဂါဝန်အောက်က အကာအကွယ်မရှိသော ရင်သားလုံးလုံးလေးကို သွားစမ်းမိသောအခါ ဖြူငယ့်အသက်ရှူသံတွေ ပိုမြန်လာသယောင်ထင်ရသည်။ နုနယ်သော ရင်သားလုံးလုံးအိအိလေးကို မင်းသစ်လက်ဖြင့်ဖြစ်ညှစ်ပေးနေမိသည်။ ဂါဝန်ကပါးလွန်းတော့ နို့သီးခေါင်းလေးကိုပင်စမ်းမိနေသည်။ လက်မနှင့်အသာပွတ်ဆွဲလိုက်တော့ ဖြူငယ့်တစ်ကိုယ်လုံး တုန်တက်သွားသည်။ မင်းသစ်အနမ်းတွေကို နှုတ်ခမ်းမှတဆင့်လည်တိုင်ကျော့ကျော့လေးဆီသို့ ပို့လိုက်တော့ ဖြူငယ့်နှုတ်ခမ်းဖျားမှအသံလေးတွေထွက်လာသည်။ “အ အင်း ကျွတ်“ စာဖြင့်ရေးပြလို့မတတ်နိုင်သော မပီမပြင်ညည်းသံလေးများပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခိုက်မှာပင် မီးကပြန်လာသည်။ လုံးထွေးနေသောနှစ်ယောက်သား မျက်လုံးများပြာဝေကာ လူချင်းခွဲလိုက်ရသည်။ ဖြူငယ့်မျက်နှာကို ကြည့်လိုက်သော ရှက်သွေးဖြင့်ပန်းရောင်သန်းနေကာ မင်းသစ်စုပ်ဆွဲထားသော နှုတ်ခမ်းဖူးလေးများက သာမန်ထက်ရဲရဲနီနေသည်။ ဖြူငယ် မင်းသစ်ကိုမျက်စောင်းလှလှလေးတစ်ချက်ထိုးကာ သူမအခန်းထဲပြေးဝင်လိုက်သည်။ “အော် စာမေးပွဲနီးနေခါမှ ရင်ခုန်စရာတွေလာပေးနေပါလား ကိုကြီးရယ် “ မင်းသစ်မြင့်မားက အသက်သုံးဆယ်အရွယ် စီးပွားရေးအောင်မြင်နေသော လူငယ်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ငယ်ငယ်လေးထဲက အဖေနှင့်အမေဆုံးပါးကာ ဦးလေးဖြစ်သူထောက်ပံ့မှုဖြင့် ကျောင်းနေပြီး ချမ်းသာသောဘ၀ရောက် အောင်ကြိုးစားခဲ့ရသည်။ ဦးလေးက နိုင်ငံခြားမှာ အလွန်အဆင်ပြေနေတော့ သူ့ကိုလိုလေးသေးမရှိ လှမ်းထောက်ပံ ပါသည်။ အခုချိန်မှာ ဦးလေးအကူအညီမလိုတော့။ သူ့အတိုင်းအတာနှင့် အမြင့်ဆုံးမဟုတ်တောင် သူ့တစ်ယောက် အတွက်သာမက သူများကိုပင် ထောက်ပံ့ကူညီနိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာသည်။ မင်းသစ်မြင့်မားသည် ငယ်စဉ်ကတည်းက မိဘမဲ့ခဲ့ရသဖြင့် မိဘမဲ့ကလေးကျောင်းများကို တတ်နိုင်သမျှ လှူဒါန်းထောက်ပံ့သည်။ သူ့အိမ်တွင်လည်း မိဘမဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကို မွေးစားထားသည်။ တစ်တန်းနှင့် နှစ်တန်းအရွယ် မောင်နှမနှစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ကလေးများကို ထမင်းချက်အဒေါ်ကြီး ဒေါ်ပုနှင့် သူ့ယောက်ျား ဦးသံခဲတို့က ထိန်းကျောင်းပေးသည်။ ဖြူငယ်အေးချမ်းသည် မင်းသစ်သူငယ်ချင်း ဇေယျ ၏ ညီမဖြစ်သည်။ ဆယ်တန်းအောင်သော် မွေးရပ်တွင် ကျောင်းမတက်ချင် ရန်ကုန်မှာပဲတက်ချင်သည် ဆိုသဖြင့် မင်းသစ်အိမ်မှာနေရွေ့ ကျောင်းတက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ သူ့ဘာသာ အဆောင်ဖြစ်ဖြစ် တိုက်ခန်းဖြစ်ဖြစ်ငှားနေနိုင်သော်လည်း အကိုဖြစ်သူက စိတ်မချသဖြင့် မင်းသစ်ကို အကူအညီတောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
အသားဖြူဖြူ မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးနှင့် လှလွန်းသည်မဟုတ်သောလည်း ချစ်စရာကောင်းသော ဖြူငယ့်ကို မင်းသစ်မြင်မြင်ချင်း သဘောကျခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းညီမဖြစ်သဖြင့် မတော်ပါဘူးဟု စိတ်ထိန်းကာ ညီမတစ်ယောက်လိုဆက်ဆံရင်းအချစ်စိတ်တွေကို သိုဝှက်ထားခဲ့ရသည်မှာ တစ်နှစ်နီးပါးပင် ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ထိန်းလာသည့်ကြားမှ ဒီနေ့တော့မင်းသစ်စိတ်တွေခနတာလွတ်သွားခဲ့သည်။ အိမ်ပေါ်မှာ သူတို့ ၂ယောက်တည်း ရှိနေသဖြင့်လည်း ပိုမိုရဲတင်းမိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ခါတိုင်းဆို ကျော်ဘုန်းနေခန့်က ရှိနေသည်။ ကျော်ဘုန်းနေခန့်ခေါ် ကျော်ကျော်သည် မင်းသစ်၏ကျေးဇူးရှင်ဦးလေး၏ သားအရင်းဖြစ်သည်။ ကိုးတန်းအရွယ်အထိ နိုင်ငံခြားတွင် နေလာရင်းက မြန်မာပြည်သို့အလည်လာပြီး ပျော်သွားကာ နိုင်ငံခြားမပြန်နိုင်ဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ ကျော်ကျော်သည် ဖြူငယ်နှင့် တက္ကသိုလ်အတူတူဖြစ်သည်။ ဖြူငယ့်ထက်တစ်နှစ်ကြီးသည်။ ဖြူငယ်အိမ်ရောက်လာ တည်းက မသိလိုက်မသိဘာသာပင်နေသဖြင့် ဖြူငယ်နှင့် သိပ်မရင်းနှီး။ မာနကြီးသလိုထင်ရလေသည်။ တစ်အိမ်တည်းနေသူချင်းမို့ တစ်ခါတလေ ကတောက်ကဆလေးတွေဖြစ်တတ်သော်လည်း အိမ်ရှင်တွေပဲဟု သဘောပိုက်ခါ ဖြူနွယ်ကပင် ရှောင်နေလိုက်သည်။ ကျောင်းချင်းအတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်း ဖြူငယ်က ကျောင်းကား စီးပြီး သူက ကိုယ်ပိုင်ကားနှင့်တက်သည်။ ဖြူငယ့်ကို တစ်ခါမှ လိုက်ဖို့မခေါ်ဖူးသလို ဖြူငယ်ကလည်း လိုက်မစီးလိုပါ။ ဖြူငယ်သဘောကျသည်က မင်းသစ်ကိုပင်ဖြစ်သည်။ မင်းသစ်က အရပ်ရှည်ရှည် ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနှင့် ရင်အုပ်ထွားထွား ယောကျာ်းပီသသော ခန္ဒာကိုယ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ အသားအရည်က မဖြူလွန်းမညိုလွန်းပဲအနေတော် ကြည့်ကောင်းသည်။ ဖြူငယ်အနှစ်သက်ဆုံးက မင်းသစ်၏ စူးရှတောက်ပသော မျက်ဝန်းတစ်စုံကိုဖြစ်သည်။ ထိုမျက်ဝန်းများနှင့် အကြည့်ခံလိုက်ရလျှင် ဖြူငယ်တစ်ကိုယ်လုံးဖောက်ထွင်းသွားသလို ခံစားရသည်။ မင်းသစ်၏ အကြည့်စူးစူးနှင့်ကြုံလိုက်တိုင်းဖြူငယ်မခံနိုင်ဘဲ မျက်လွှာချရသည်သာဖြစ်သည်။ ထိုအကြည့်ကို ဖြူငယ်က မှော်ဆရာ အကြည့်ဟု ကိုယ့်ဘာသာတိတ်တိတ်လေးနာမည်ပေးထားသည်။ ညှို့ယူဖမ်းစားနိုင်လွန်းသော မှော်ဆရာ၏ နှုတ်မှ ချစ်စကားကို ဖြူငယ်စောင့်စားခဲ့ရသည်မှာ ကာလအတော်ကြာပြီဖြစ်သော်လည်း ဒီနေ့လိုအဖြစ်မျိုးကိုတော့ တစ်သက်နှင့်တစ်ကိုယ် မမျှော်လင့်ဖူးပါ………. ဖြူငယ်တို့ နှစ်ဝက်စာမေးပွဲမနက်ဖြန်ဆို ပြီးပြီ။ ဒီကြားထဲမှာ မင်းသစ်ကလည်း အလုပ်တွေပဲ အရမ်းရှုပ်နေလို့လား၊ မီးပျက်တဲ့ညက ကိစ္စကိုမျက်နှာပူသည်လားမသိ မနက်ဆိုအစောကြီးထွက်သွားခါ ညဆိုလည်း အတော်ညဉ့်နက်မှပြန်ပြန်လာသည်။ ဖြူငယ်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ခဲ့သည့်ကိစ္စကိုမကြာခဏတွေးမိတိုင်း ရင်ခုန်မိ ပေမဲ့ စာလည်းကြည့်ရသေးသည်မို့တတ်နိုင်သလောက်ခေါင်းထဲကမေ့ထားဖြစ်သည်။
တွေးမိတဲ့အခါတိုင်းလည်း အတွေးတွေက အမျိုးမျိုးပြောင်းနေသည်။ တစ်အိမ်တည်းရင်းရင်းနှီးနှီးနေခဲ့ပေမဲ့ တစ်ခါမှအခွင့်ရေးမယူဖူးသူ မင်းသစ်က တကယ်တမ်းကျတော့လည်း လက်ရဲဇက်ရဲနိုင်လွန်းလှသည်။ နောက်ပိုင်းကျတော့လည်း ဘာမှမဖြစ်သလို နေကာ ဖြူငယ့်ကို စကားတစ်ခွန်းတလေတောင်လာမပြော။ ပြန်တွေးကြည့်တော့လည်းစကားလာပြောရင် ဖြူငယ် ရှက်လွန်းလို့မျက်နှာဘယ်မှာထားရမှန်းတောင်သိမည်မဟုတ်ပါ။ မင်းသစ်အတွက်ဘယ်လိုနေလဲမသိပေမဲ့ ရည်းစားမထားဖူးသော အပျိုရိုင်းလေး ဖြူငယ့်အတွက် မင်းသစ်ပေးသွားသောအတွေ့အကြုံက အကြီးကြီးဖြစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် ဖြူငယ်တိတ်တခိုးစွဲလမ်းနေရသူ မင်းသစ်ကို စိတ်ဆိုးရမည်လား ရှက်ရမည်လား ဝေခွဲရခက်စွာဖြင့် ဒီတစ်ညလည်းအတွေးနွံထဲနှစ်မျောရင်းဖြူငယ်အိပ်ပျော်ရပြန်သည်။ “ဖြူလေး…..“ “အော်….ကိုကြီး“ “ဒီနေ့စာမေးပွဲတွေ အကုန်ပြီးပြီဆို…. အစောကြီးပြန်လာတာ ဖြေနိုင်ရဲ့လား…သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လျှောက်မလည်ကြ ဘူးလား…“ “ဟုတ်..ဖြေနိုင်ပါတယ်…. ညကျမှ ရှိုးပွဲသွားကြည့်မလို့ ဥမ္မာတို့ကိုလာခေါ်ခိုင်းထားတယ်…“ “အော်… ကျော်ကျော်လည်းအဲရှိုးပွဲသွားမယ်ပြောတယ်…. ညနက်မှာပေါ့…..“ ဖြူငယ် ဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိတော့ ဒန်းလေးပေါ်ထိုင်နေရင်း ခေါင်းကိုငုံထားလိုက်သည်။ မင်းသစ်က မတ်တပ်ရပ်ရင်း ဖြူငယ့်ကို စိုက်ကြည့်နေသည်။ သူ့အကြည့်တွေကိုဖြူငယ် ရင်မဆိုင်ချင်တော့။ တစ်ပတ်လောက်အခေါ်အပြောမလုပ်ဘဲ စာမေးပွဲပြီးလို့ အိမ်ပြန်ခါနီးမှ စကားတွေလာပြောနေသော သူ့ကို စိတ်နာသလိုလိုဖြစ်နေမိသည်။ “ဖြူလေး……. ကိုယ်လေ……“ “ဟို……… တနေ့ညက ကိစ္စလေ ကိုယ်အနူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ကွာ……… ကိုယ်စိတ်မထိန်းနိုင်ဖြစ်သွားလို့ပါ…………….“ စကားကိုတစ်လုံးချင်းပြောနေသော မင်းသစ်ကို ဖြူငယ် အကြည့်စူးစူးဖြင့် မော့ကြည့်လိုက်ရင်း….. “ဘာကို စိတ်မထိန်းနိုင်တာလဲဟင်…….. ကိုကြီးဘာလို့အဲလိုလုပ်တာလဲ……“ “ဟိုလေ… ဟင်းး…မီးပျက်သွားပြီးတော့လေ ဟို.. ကိုယ်လည်းမသိတော့ဘူးကွာ………. ဖြူလေးက ကိုယ့်ရင်ခွင်ထဲ ရောက်နေပြီး ကိုယ်မထိန်းနိုင်လိုက်တာ… ပြီးတော့ ကိုယ်ဖြူလေးကိုလေ………..“ “ဟားး..ကိုမင်းသစ်က ဒီရောက်နေတာကိုးး ကျနော်ကလိုက်ရှာနေတာ…….ဟဲဟဲ ကျနော်ပိုက်ဆံပြတ်သွားလို့ နဲနဲလောက်ပေးပါအုံး“ “အော် အေး ညီလေး… အပေါ်တစ်ခါတည်းလိုက်ခဲ့လေ အကို့ပိုက်ဆံအိတ်ကအပေါ်မှာ… “ ဖြူငယ်တော်တော်စိတ်ပျက်သွားသည်။ ကောင်းခန်းရောက်မှ မသာလေးကျော်ကျော်က ၀င်နှောက်ယှက်ပြန်ပီ။ ပုခုံးဖက်ပြီးထွက်သွားသောညီအကိုနှစ်ယောက်ကျောပြင်အား ဖြူငယ်မျက်စောင်းကြီးကြီးထိုးပစ်လိုက်သည်။
ဖြူငယ်အခုဆို မော်လမြိုင်ပြန်ရောက်နေပြီ။ တနေ့တနေ့အိမ်မှာနေရင်း မင်းသစ်အကြောင်းတွေပဲစဉ်းစားနေမိသည်။ ရန်ကုန်ကပြန်တဲ့နေ့က သူမကိုလိုက်ပို့တာ၊ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ကိုယ်ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်နော် မြန်မြန်ပြန်လာခဲ့နော် ဆိုပြီး မှာတမ်းချွေခဲ့တာတွေတွေးရင်း သူ့အပေါ်စိတ်ဆိုးမိတာတွေဘယ်ရောက်သွားမှန်းတောင်မသိတော့ပါ။ ဖြူငယ်ပြန်ရောက်ပြီး တစ်ပတ်လောက်အကြာမှာပင် မင်းသစ်က သူမအားဖုန်းထဲမှ ဖွင့်ပြောခဲ့ပြီး ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ လွမ်းလွန်းလှပြီ ဖြစ်သော မင်းသစ်၏မျက်နှာကို မြင်ရဖို့ ကျောင်းပြန်မဖွင့်ခင် တစ်လလောက်အလိုတည်းက ရန်ကုန်ပြန်ရန် အိမ်ကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြထားပြီ ဖြစ်သည်။ ဖြူငယ် ရန်ကုန်ကိုမောကြီးပန်းကြီးပြန်ရောက်လာတော့ မင်းသစ်က အိမ်မှာမရှိ။ အလုပ်သွားချိန်မို့ မရှိလောက်ပါဘူးဟုကြိုမျှော်လင့်ထားပေမဲ့ တကယ်တမ်းမတွေ့ရတော့လည်း ရင်ထဲ မောသလိုလိုဖြစ်သွားသည်။ ခရီးလည်း ပန်းတာကြောင့် ရေ၀၀ချိုးပြီး ခုတင်ပေါ်ခနလှဲရင်း အိပ်ပျော်သွားသည်။ အိပ်ရာကနိုးလာပြီး အခန်းပြင်ထွက်ကြည့်တော့ မင်းသစ်က အိမ်ရှေ့ခန်းဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်နေသည်။ သူမကိုတွေ့တော့ ပြုံးစစဖြင့် “ဖြူလေး နိုးပြီလား……. လာထိုင်ပါအုံး“ ဖြူငယ် မင်းသစ်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆိုဖာမှာဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ “ကိုယ်ဖြူလေးကိုအရမ်းလွမ်းနေတာ.. အလုပ်တွေတောင် ဒီနေ့ နေ့တစ်ပိုင်းနဲ့ဖြတ်ထားပြီး ပြန်လာခဲ့တာ.. လာမကြိုဖြစ်တာ ခွင့်လွှတ်ပါဖြူရယ် နော်“ “အင်းပါ ကိုကြီးအလုပ်များတာ ဖြူငယ်သိပါတယ်….. ထမင်းစားပြီးပြီလားမစားရသေးရင် ဖြူငယ် သွားပြင်ပေးမယ်“ ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့်ထရပ်မည်ပြုသော ဖြူငယ့်ကို မင်းသစ်လက်လှမ်းဆွဲပြီးသူ့နားမှာထိုင်ခိုင်းလိုက်သည်။ “ နေပါအုံး ဖြူလေးရယ်“ အနီးကပ်ကြည့်လိုက်တော့စူးး၇ှတောက်ပနေသော မင်းသစ်၏မျက်ဝန်းညိုများက အရောင်တလက်လက်တောက်ပ်နေသလို ထင်ရသည်။ ဖြူငယ့် ရင်တွေအရမ်းခုန်လာသည်။ မင်းသစ်၏အကြည့်စူးစူးကိုမခံနိုင်သော ဖြူငယ် မျက်လွှာလေးချထားလိုက်ရင်း… “ဘာ ဘာပြောမှာလဲ ပြောလေ….“ ဖြူငယ်အသံတွေက တုန်ရီလွန်းနေသည်မှာသိသာလှပါသည်။ “ကိုယ်ဖုန်းထဲမှာပြောခဲ့တဲ့စကားက မလေးနက်မှာစိုးလို့ ထပ်ပြောမလို့ ….ကိုယ်ဖြူလေးကိုချစ်တယ်…..အရမ်းချစ်တယ်… “ ချစ်သူတွေဖြစ်ပြီးသားဆိုပေမဲ့ ခုလိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ကြည့်ပြောနေတော့လည်း ဖြူငယ်ရှက်သွေးဖြာပြီး ခေါင်းလေးငုံ့ထားမိသည်။ မင်းသစ်တစ်ယောက် ဖြူငယ်ရှက်နေပုံလေးကိုကြည့်ရင်း အသဲယားလာကာ လက်မောင်းလုံးလုံးလေးတွေကိုလှမ်းဖက်လိုက်ရင်း ကိုယ်လုံးလေးကို ရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းရင်း ခေါ်လိုက်သည်။ “ဖြူလေး….“ သူ့ရင်ခွင်ထဲကနေ မျက်လုံးဝိုင်းလေးနှင့်မော့ကြည့်လာသောဖြူငယ့်မျက်နှာလေးကို မင်းသစ်ငုံ့ကြည့်လိုက်သည်။
မျက်လုံးနက်နက်တောက်တောက်လေးတွေ၊ နှာခေါင်းလုံးလုံး ပါးဖောင်းဖောင်းလေးနှင့် ဖြူငယ်သည် ကလေးလေး တစ်ယောက်လိုအပြစ်ကင်းစွာ ချစ်ဖို့ကောင်းနေသည်။ ပန်းနုရောင်နှုတ်ခမ်းဖူးလေးကိုကြည့်မိတော့ မင်းသစ်ရင်ထဲ့ ဗလောင်ဆူလာသည်။ ဖြူငယ်မျက်နှာလေးကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ဆွဲမကာ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို စုပ်နမ်းလိုက်သည်။ ဒီနှုတ်ခမ်းလေးတွေက မင်းသစ်စိတ်အာရုံထဲ၊ အိပ်မက်တွေထဲမှာစိုးမိုးခဲ့တာကြာပြီ။ ဖြူငယ့် နှုတ်ခမ်းလေးတွေက ပန်းရောင်နှင်းဆီပန်းဖူးလေးလို ဖူးငုံငုံလေးတွေ..။ ထိုနှုတ်ခမ်းလေးများ ကိုခပ်ဟဟလေး ဖွင့်လိုက်ပါက အသဲပုံလေးနှင့်တူသည်ဟု မင်းသစ်စဉ်းစားဖူးသည်။ ဘယ်လောက် ကြာကြာနမ်းကြောရှည်နေမိလဲတောင် မသိတော့။ မှေးစင်းနေသောဖြူငယ်မျက်လုံးလေးတွေပွင့်လာပြီး မင်းသစ်ရင်အုပ်ကြီးကို လက်ဖြင့်တွန်းဖယ်ကာ “တော်လောက်ပြီ ကိုကြီးရယ် တော်ပါတော့နော် တခြားသူတွေတွေ့ကုန်လိမ့်မယ်“ မင်းသစ်ဖြူငယ့်ကိုအသာလွှတ်ပေးလိုက်ရင်း ခေါင်းညိမ့်ပြလိုက်သည်။ ဒီနေ့မှစတော်ရသော ချစ်သူနှင့် ဒီထက်ခရီးရောက်ဖို့လည်းသူမစဉ်းစားထားပါ။ ဖြူငယ်စိတ်ဆိုးမှာသူကြောက်သည်။ မီးပျက်သောညက သူလက်သရမ်းမိသည်ကို ဖြူငယ်စိတ်ဆိုးသွားပြီ အထင်နှင့် သူတော်တော်နောင်တရခဲ့သည်။ ဖြူငယ်ကသာသူ့ကို မလိုလားဘဲ သူမအကိုထံ တိုင်လားတောလားလုပ်ရင် မင်းသစ်တစ်သက်လုံးထိန်းသိမ်းလာသော ဂုဏ်သိက္ခာရေစုန်မျောမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း စဉ်းစားမိသည်။ မထင်မှတ်ပဲ ဖြူငယ်ကလည်း သူ့အပေါ်စိတ်ဝင်စားသည့်အရိပ်အယောင်များတွေ့လာသောကြောင့်သာ သူအရဲစွန့်ပြီး ဖွင့်ပြောမိချင်းဖြစ်သည်။ ရှေ့လျှောက်လည်း ဖြူငယ်အခွင့်အရေးပေးသလောက်သာ ရှေ့ဆက်ဖို့သူဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ချစ်သူတွေဖြစ်ကာစရက်များမှာ အိမ်ကလူတွေမရိပ်မိအောင်လည်း ဖုံးဖုံးဖိဖိ နေရသည်။ အိမ်သားများကလည်း တစ်ယောက်မဟုတ် တစ်ယောက်ရှိနေကြသဖြင့် အိမ်မှာဆို လွတ်လွတ်လပ်လပ်မရှိ။ အပြင်မှာသာ ချိန်းတွေ့ကြရသည်။ မင်းသစ်မှာ ဆယ်ကျော်သက်အတွဲများလို ဘုရားသွားလိုက် ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက် မုန့်ဆိုင်ထိုင်လိုက်ဖြင့် မိမိနှင့် အသက် ဆယ်နှစ်လောက်ကွာသောချစ်သူလေးအလိုကျ ဖြည့်ဆည်းရသည်။
တစ်နေ့တော့ private ခန်းယူလို့ရသော စားသောက်ဆိုင်လေးတစ်ခုမှာ ထိုင်ကြသည်။ “ ဖြူလေး.. ဘီယာသောက်မလား“ ဖြူငယ် နှာခေါင်းလေးရှုံ့ရင်း .. “ဟင့်အင်း မသောက်ချင်ပါဘူး….“ “သောက်ကြည့်ပါ ဖြူလေးရဲ့…အရသာမဆိုးပါဘူး“ မင်းသစ်အတင်းတိုက်တွန်းသဖြင့် ဖြူငယ်ဘီယာ စမ်းသောက်ကြည့်လိုက်သည်။ မသောက်ဖူးသူမို့ တစ်ခွက် နှစ်ခွက်လောက်သောက်ပြီး ဖြူငယ် ရီဝေေ၀ဖြစ်နေသည်။ မင်းသစ်က ဖြူငယ့်ကိုဖက်ရင်း နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို စုပ်နမ်းတော့ ဖြူငယ်မငြင်းဆန်ဘဲပြန်လည်နမ်းသည်။ “ချစ်တယ် ဖြူလေးရယ် အရမ်းချစ်တာပဲ“ ဖြူငယ့် နှုတ်ခမ်းများမှတဆင့် လည်တိုင်ဖြူဖြူလေးအထိ အနမ်းတွေခြွေဆင်းလိုက်သည်။ လွတ်နေသောလက်တစ်ဖက်က ဖြူငယ် ရင်သားများကို ဖွဖွလေး ဆုပ်နယ်ပေးလိုက်သည်။ ညည်းသံတိုးတိုးလေးမှ အပ ဖြူငယ့်ထံမှ ငြင်းဆန်သံထွက်မလာသဖြင့် ဆိုဖာအရှည်ပေါ်ဖြူငယ့်ကို တွန်းလှဲလိုက်သည်။ ဖြူငယ် ၀တ်ထားသော တီရှပ် အကျီ ပွပွလေးကို လှန်တင်လိုက်တော့ ဘရာစီယာ ပန်းရောင်လေးနှင့် ရင်သားဖြူဝင်းဝင်းလေးများက မင်းသစ်အကြည့်တွေကိုဖမ်းစားထားသည်။ ဘရာစီယာကိုလှန်တင်လိုက်ပြီး မကြီးလွန်းမသေးလွန်းသော ဖြူငယ့်ရင်သားဖြူဖြူအိအိလေးကို မင်းသစ်နှုတ်ခမ်းတွေနှင့် ထိတွေ့ပြီးစုပ်နမ်းလိုက်သည်။ လက်တစ်ဖက်ကလည်း ဂျင်းစကပ်အတိုလေးအောက်မှ လျှိုဝင်ကာ အုပ်ကိုင် ဖြစ်ညှစ်နေတော့ ဖြူငယ်ထံမှညည်းသံခပ်ကျယ်ကျယ်လေးထွက်လာပြီး ရင်ဘတ်လေးကော့တက်လာသည်။ ပန်တီအောက်ကိုလက်သွင်းပြီး အပျိုစင်အပေါက်လေးကို လက်နှင့်စုန်ဆန်ပွတ်သပ်ပေးလိုက်တော့ ဖြူငယ့်အသက်ရှုသံတွေမြန်ဆန်ကျယ်လောင်လာသည်။ အ၀လေးကိုစမ်းပြီး လက်ခလယ်ကို အသာသွင်းကြည့်လိုက်တော့ တော်တော်လေးကြပ်ညပ်နေသော်လည်း လက်တစ်စစ်လောက်ဝင်သွားသည်။ ထိုလက်ကိုပဲအသာထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်လုပ်ပါများတော့ အရည်ကြည်လေးတွေအနည်းငယ် စိုစွတ်လာပြီး သွင်းရပိုလွယ်လာသည်။ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် လှုပ်ခါနေသောဖြူငယ့်ရင်သားများကို လက်ဖြင့် ဖြစ်ညှစ်ကာ ဘယ်ညာပြောင်းစို့ရင်း အောက်က လက်ခလယ်ကိုအဆုံးထိထိုးသွင်းလိုက်သည်။ ကြပ်သိပ်နေသော်လည်း အပျိုးအမြှေးပါးကိုမစမ်းမိပါ။ လက်လှမ်းမမှီတာကြောင့်လား နဂိုထဲကမရှိတော့တာလားတော့မသိ။ သို့သော်အပျိုစစ်စစ်ဖြစ်သော ဖြူငယ့် အနေအထိုင်ကို မင်းသစ်ယုံပါသည်။
လက်အသွင်းအထုတ်ပိုမိုမြန်ဆန်လာသည်နှင့်အမျှ ဖြူငယ်ကိုယ်လုံးလေးမှာလည်း ယိမ်းထိုးလှုပ်ရှားရင်း မင်းသစ်၏ ခေါင်းကို လက်များဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ဖက်တွယ်ထားသည်။ “အ အား ကိုကို…….ဟင်းးး” ညည်းသံရှည်လေးနှင့်အတူ မင်းသစ်လက်တွေကို ကိုင်ခါဖယ်ရှားနေသောဖြူငယ့်ကို ညင်သာစွာလှမ်းမေးလိုက်သည်။ ”ဖြူလေး..ပြီးသွားပြီလား……”ကျော်ဘုန်းနေခန့်တစ်ယောက် လူကသာကန်တင်းမှာထိုင်နေပေမဲ့ စိတ်တွေက ဟိုဟိုဒီဒီပျံ့လွင့်နေသည်။ မထင်မှတ်ဘဲ ညက မြင်ခဲ့ရသောမြင်ကွင်းကို သူ့အာရုံထဲက ဖျောက်ဖို့မလွယ်ပေ။ ညက သူ့သူငယ်ချင်းအိမ်မှာ ပါတီရှိလို့ အိမ်ပြန်အိပ်မည်မဟုတ်ကြောင်း ကိုမင်းသစ်ကို ပြောပြီးထွက်လာခဲ့သည်။ သို့သော် ပါတီမှာ ဘော်ဒါအချို့နှင့် ညိပြီး အာရုံနောက်လာသဖြင့် အိမ်ကိုပဲပြန်လာခဲ့သည်။ သူအိမ်ပေါ်တက်လာတော့ အပေါ်ထပ်တစ်ခုလုံးက မှောင်မဲနေသည်။ သူ့အခန်းရှေ့အရောက်မှာ မင်းသစ်အခန်းဘက်က မိန်းကလေးတစ်ယောက်အသံကြားသဖြင့် သွားကြည့်လိုက်တော့ မင်းသစ်အခန်းတံခါးက ပိတ်မထား။ စေ့ရုံသာစေ့ထားသောကြောင့် အနည်းငယ်တွန်းကြည့်လိုက်တော့ အခန်းထဲမှာ ထင်မှတ်မထားသောမြင်ကွင်းကို မြင်လိုက်ရသည်။ ညမီးအိမ် ၀ါဝါအောက်မှာ အ၀တ်ကင်းမဲ့နေသောဖြူငယ်နှင့် သူမပေါင်ကြားထဲခေါင်းရောက်နေသောမင်းသစ်..။ အနီရောင်အိပ်ယာခင်းပေါ်မှာ ဖြူငယ့်ကိုယ်လုံးလေးက ဖြူဖွေးဝင်းမွတ်နေသည်။ ခေါင်းအုံးများထပ်ကာ ကျော်မှီထားပြီး ပေါင်တံဖြူနှစ်ချောင်းကို ခွဲကာထောင်ထားသည်။ ရင်သားအိအိထွားထွားများက မောပန်းမှုကြောင့်လား စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်လားမသိ လှိုက်ဖိုလှုပ်ရှားနေသည်ကို အတိုင်းသားတွေ့နေရသည်။ ကုတင်ခေါင်းရင်းကိုလက်များနှင့်နောက်ပြန်ဆုပ်ကိုင်ရင်း ညည်းတွားနေသောဖြူငယ့်မျက်နှာလေးမှာ မင်းသစ်၏ ဘာဂျာကို အစွမ်းကုန်ခံယူနေကြောင်းသိသာလှသည်။ “အား..အားး အဲနေရာလေးကိုလျက်ပေး ကိုကို ကောင်းတယ်…အင်း….ဟင့်” စိတ်လှုပ်ရှားစရာမြင်ကွင်းနှင့် အသံများကိုကြားနေရသော ကျော်ဘုန်းနေခန့်တစ်ယောက် ရေဆာသလိုလိုဖြစ်လာပြီး ဂလုခနဲ တံတွေးမျိုချမိသည်။ အရက်လည်းသောက်လာခဲ့သဖြင့် ရင်တွေပါပိုပူတက်လာသည်။ အောက်ကပစ္စည်းကလည်း နိုးထလာပြီး ခေါင်းထောင်ကြည့်ချင်နေသည်။ “အ..ကိုကို…ဖြူပီးတော့မယ် အားး ဟားးး ကျွတ်……အူးးးး” ကြည့်နေရင်းပင် ဖြူငယ်တစ်ယောက် ကော့တက်နေသောသူမရင်သားများကိုလက်ဖြင့်ဆုပ်နယ်ရင်း ခံစားမှု အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်သွားပုံရသည်။ မင်းသစ်လည်း ကုန်းထလာပြီး တံခါးဘက်မျက်နှာလှည့်လိုက်သောကြောင့် ကျော်ဘုန်းနေခန့် ရုတ်တရက် နံရံဘက်ကိုရွှေ့ပြီးပုန်းလိုက်ရသည်။ လင်းနေသောအခန်းထဲမှ မှောင်နေသောအပြင်ဘက်ကို လှမ်းမမြင်နိုင်လောက်ပါ။
သို့သော်သူဆက်မကြည့်တော့ဘဲ ခြေကိုဖွနင်းပြီးသူ့အခန်းထဲ ၀င်လိုက်သည်။ ဟူး……ဖြူငယ်……..တော်တော်မလွယ်တဲ့ဟာမလေးပဲ။ ဖြူငယ်က ကျောင်းမှာအနေအေးပြီး အိမ်မှာလည်းကလေးလိုပဲနေကာ အိမ်က ကလေးတွေနှင့်ဆော့လိုက် ကစားလိုက် ဆိုတော့ သူသေသေချာချာတောင် သတိထားမကြည့်ဖူးပါ။ အခုတော့ ဖြူငယ့်အတွင်းပစ္စည်းအစုံအလင် နီးပါးသူတွေ့လိုက်ရသည်။ ကျော်ဘုန်းနေခန့်ကရုပ်ဖြောင့်ပြီး ပိုက်ဆံရှိသောသူဌေးသားတစ်ယောက်မို့ ဆော်အလန်းလေးတွေက လာလာကပ်ကြသည်။ သူကလည်း ထိုအထဲကမှ စိတ်ကြိုက်ရွေးပြီး တွဲသည်။ ဖိုမဆက်ဆံရေးကို လူပျိုပေါက်အရွယ် နိုင်ငံခြားမှာတည်းက အစွမ်းအစရှိခဲ့ပြီး အခု အသက်နှစ်ဆယ်ကျော်တွင် တော်တော်လေး ကျွမ်းကျင်နေပြီဖြစ်သည်။ ဘယ်မိန်းကလေးကို ဘယ်လိုချဉ်းကပ်ရမည်၊ ဘယ်လိုသိမ်းသွင်းရမည်၊ ဘယ်လိုသဘောကျအောင်လုပ်ပြီး ဖြုတ်ရမည်ဆိုတာမျိုးတွေသူကျမ်းကျေနေပြီ။ ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့တာတွေရော ဗီဒီယိုတွေ စာတွေဘယ်လိုပဲရိုးနေပြီဖြစ်သော်လည်း သူများချစ်တင်းနှောတာကို အပြင်မှာဒီလိုတွေ့ဖူးတာတော့ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ပဲလားတော့မသိ အခုအကျောင်းကိုရောက်ပြီး ကန်တင်းမှာထိုင်နေသည့်အချိန် အထိ စိတ်က ဖြူငယ့်မျက်နှာကိုပဲပြေးပြေးမြင်နေသည်။ ဖြူငယ်သည်တစ်ချိန်မှာသူ့ခယ်မ တောင်ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု သူတွေးရင်းပြုံးမိသည်။ ဖြူငယ်တို့ကျောင်းစာမေးပွဲမဖြေရခင် တစ်လလောက်အလိုမှာ ကျော်ဘုန်းနေခန့်ကလပ်မှာရန်ဖြစ်ရင်း ခေါင်းကိုအရိုက်ခံရကာ ဆေးရုံရောက်သည်။ ဒဏ်ရာမကြီးသော်လည်းဆေးရုံမှာ နှစ်ပတ်လောက်တက်ရတော့ မင်းသစ်က တော်တော်လေးစိုးရိမ်နေသည်။ ဖြူငယ်လည်းမနေသာတော့ပဲ လိုအပ်တာတွေလိုက်လုပ်ပေးရသည်။ မင်းသစ်က ညဘက်စောင့်အိပ်ပေးပြီး ဖြူငယ်က ကျော်ကျော့်အတွက်နေ့တိုင်းချက်ပြုတ်ပြီး ဆေးရုံကိုပို့ပေးသည်။ ကျောင်းစာတွေလည်းမလွတ်အောင် ကော်ပီတွေကူးပေးသည်။ သူက နဂိုတည်းက စာမကြိုးစားသော်လည်း ဖြူငယ့်စေတနာကိုအသိအမှတ်ပြုရပါသည်။ ဖြူငယ်သည် တကယ်တမ်းရင်းနှီးလာတော့မှ တော်တော်ခင်ဖို့ကောင်းသောသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း ကျော်ဘုန်းနေခန့်သိလာရလေသည်။ ဒေါက်…ဒေါက် တံခါးခေါက်သံကြားသဖြင့်ဖြူငယ်သွားဖွင့်လိုက်တော့ မင်းသစ်က အခန်းထဲဝင်လာသည်။
“ကိုကို ဘာလာလုပ်တာတုန်း ဖြူအခုပဲအိပ်တော့မလို့” မင်းသစ်ကစပ်ဖြဲဖြဲဖြင့်……… “ဖြူလေးကိုလွမ်းလို့ ဟီးဟီး” ဖြုငယ်က မင်းသစ်ကိုမျက်စောင်းလေးထိုးလိုက်ရင်း “နေ့တိုင်းတွေ့နေရတာပဲလွမ်းတယ်ရှိသေးလား ” “ဒီနှုတ်ခမ်းလေးကိုလွမ်းတာလေ” ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့် မင်းသစ်က ညအိပ်ဂါဝန်လက်ပြတ်လေးနှင့်ရပ်နေသောဖြူငယ်ကို ဆွဲဖက်နမ်းရှုံ့လိုက်သည်။ ဖြူငယ်ကလည်းမဆိုင်းမတွပင် အနမ်းကြမ်းကြမ်းများဖြင့် ပြန်လည်တုံ့ပြန်သောကြောင့် နှစ်ဦးသား အချစ်ဆိပ်တွေ တရိပ်ရိပ်တက်ရင်း ကုတင်ပေါ်လုံးကာထွေးကာဖြင့်ရောက်သွားလေသည်။ ဖြူငယ်ဝတ်ထားသောပိုးသားဂါဝန်ပျော့ပျော့လေးကို မင်းသစ်ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ ဘာမှခံမ၀တ်ထားသဖြင့် ဖြူငယ့် တစ်ကိုယ်လုံး မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းပင်။ မို့မောက်နေသောရင်သားများပေါ်တွင် နို့သီးလေးများက စိတ်တက်ကြွလာမှုကြောင့် ကော့ထောင်နေကြသည်။ မင်းသစ်က လက်များနှင့်ပင့်ကာဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး နို့သီးလေးများကို ငုံကာစုပ်လိုက်သည်။ “အား..အင်းးအင်းး ရှီးး” ဖြူငယ့်လက်များကမင်းသစ်ခေါင်းမှဆံပင်များကိုထိုးဖွနေပြီး ပေါင်တံတွေကလည်းအလိုအလျောက်ကားလာသည်။ မင်းသစ်က ရင်သားများလက်နှင့်ဆုပ်နယ်ရင်း နှုတ်ခမ်းမှ အနမ်းများကို ၀မ်းဗိုက်ဖြူဖြူလေးပေါ်ခြွေချလိုက်သည်။ ထိုမှတဆင့် မင်းသစ်၏ လျှာက တောအုပ်ခပ်ကျဲကျဲလေးကိုဖြတ်ကျော်ရင်း ရည်ရွယ်ရာ အသားနုနုလေးများဆီသို့ အရောက်သွားနေသည်။ အရည်ကြည်လေးများစိမ့်ထွက်ရာ အသားလွှာနှစ်ခုကို လက်နှင့်အသာဖြဲလိုက်ပြီး လျှာနှင့်ထိုးဆွကစားလိုက်တော့ ဖြူငယ့်လက်များက သူ့ခေါင်းကိုမလွတ်တမ်းဆုပ်ကိုင်လာသည်။ လျှာဖျားလေးနှင့်ထိုးကာ ထိုးကာ အတွင်းပိုင်သို့ပိုမိုဝင်ရောက်ရန် ကြိုးစားမိသည်။ “အင့် အင့် ကိုကို အာ….အားးးး” ဖြူငယ်ကုန်းရုန်းထလာပြီး မင်းသစ်ခေါင်းကိုလက်ဖြင့်ဆွဲမကာ နှုတ်ခမ်းတွေကိုစုပ်နမ်းလိုက်သည်။ “ဖြူလေး ပြီးသွားပြီလား” “အင်းး”… ဖြူငယ့်လေသံက တုံ့ဆိုင်းဆိုင်း…. “တကယ်ပြီးတာရောဟုတ်ရဲ့လား မြန်လိုက်တာ” ဖြုငယ်က ခေါင်းငုံ့ရင်း…“အင်းဆို” “ဒါဆိုကိုကို့ကို တစ်လှည့်လုပ်ပေးနော်” မင်းသစ် ကုတင်ပေါ်မှဆင်းကာ မတ်တပ်ရပ်လိုက်သည်။ ဖြူငယ်က အလိုက်တသိပင် ကုတင်ပေါ်မှာလိုက်ဆင်းကာ သူ့ရှေ့မှာ ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်သည်။ ထောင်မတ်နေသော သူ့ပစ္စည်းက ဖြူငယ့်ရှေ့မှာ တရမ်းရမ်းဖြစ်နေသည်။ ဖြူငယ်က လက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး ရေခဲမုန့်စားသလို သူမ၏လျှာဖြင့် ထိပ်ဖျားကို အသာလှည့်ပတ်လျက်လိုက်ပြီးမှ နှုတ်ခမ်းလေးကိုဟကာ ငုံလိုက်တော့ မင်းသစ်တစ်ယောက် ရေပူစမ်းမှာ စိမ်လိုက်ရသလို နွေးထွေးသွားသည်။ လက်တစ်ဖက်ကလည်း တွဲကျနေသော ဥနှစ်လုံးကို အသာဖွဖွ ဆုပ်နယ်ရင်းကစားပေးသည်။ ချစ်သူသက်တမ်းတစ်နှစ်ပြည့်ခါနီးပီမို့ ဖြူငယ့် BJ အစွမ်းတွေလည်း တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်လာကာ မင်းသစ်၏အကြိုက်ကိုသိနေပြီ ဖြစ်သည်။ ဖြူငယ် ပါးစပ်ကိုလေစုပ်စက်တစ်ခုလို လေးငါးခါလောက် အားနှင့်စုပ်ချလိုက်သည်။
အာခေါင်သို့ထိတိုင်အောင် ပါးစပ်နောက်ပိုင်းသို့ တွန်းပို့သည်။မင်းသစ်တစ်ယောက် အီးခနဲ ရှီးခနဲ ဖြစ်ကာ ဖြူငယ့်ခေါင်းကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ထိန်းကိုင်ရင်း ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်ပေးလိုက်သည်။ အချိန်ခဏလေးအတွင်း မင်းသစ်ပြီးချင်သလိုလိုပင်ဖြစ်နေပြီ။ နောက်ထပ် သုံးလေးချက်လောက် စုပ်ပြီးသောအခါ ဥနှစ်လုံးကျုံ့တက်သွားပြီး ထွက်လာသောအရည်တွေက ဖြူငယ့်ပါးစပ်တစ်ခုလုံး ပြည့်သွားတော့သည်။ ဖြူငယ့်သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေက သူတို့စုံတွဲကိုအလွန်အားကျကြသည်။ မင်းသစ်က ဖြူငယ့်ကိုအရမ်းအလိုလိုက်သည်။ ချစ်သူသက်တမ်းတစ်နှစ်ကျော်သည့်တိုင်အောင် သူတို့နှစ်ယောက် ကြီးကြီးမားမား ရန်မဖြစ်ဖူးကြပါ။ အသက်လည်းပိုကြီးသော မင်းသစ်က သူမှားမှားမှန်မှန် အလျှော့ပေးကာ ဖြူငယ့်ကို ချော့သည်။ ဖြူငယ်ဖြစ်ချင်တာမှန်သမျှအတတ်နိုင်ဆုံး လုပ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်လည်းအပြန်အလှန်အနေဖြင့် ဖြူငယ်က မင်းသစ်၏ ဆန္ဒကို အချိန်မရွေးဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ လိင်ကိစ္စများကို အင်တာနက်မှတဆင့် ယောက်ျားများစိတ်ကျေနပ်စေမည့်နည်းလမ်းများ ရှာဖွေဖတ်ရှုကာ မင်းသစ်စိတ်ကျေနပ်အောင် ကြိုးစားပေးသည်။ သူတို့နှစ်ဦး၏ ချစ်သူဘ၀သည် အလွန်အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ရသော ပန်းခင်းလမ်းတစ်ခုတဖွယ်သာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် သဘာဝလောကကြီးက သူတို့ကိုပျော်ရွှင်စရာများချည်း ပေးသည်မဟုတ်ပါ။ ဖြူငယ် တတိယနှစ် နှစ်ဝက်တက်စဉ်မှာပင် သူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးကြား ကတောက်ကဆဖြစ်စရာများ ကြုံခဲ့ရသည်။ ထိုပြသနာများသည် ဆွီတီဟုခေါ်သော မိန်းမတစ်ယောက်အသွင်ဆောင်ကာ ဖြူငယ့်ထံအလည်လာခဲ့လေသည်။ ဖြူငယ့်ဖုန်းကို ဆက်ကာ မင်းသစ်မြင့်မားနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စများဆွေးနွေးစရာ ရှိသည်ဟု ပြောလာသော ထိုမိန်းမကို ဖြူငယ်အကဲခတ်နေမိသည်။ ဖြူငယ့်ထက်အသက်ကြီးမှန်းသေချာသော်လည်း နုပျိုသောမျက်နှာက စွဲဆောင်မှုရှိရှိ လှပနေသည်။ ၀တ်ပုံစားပုံက အဆင့်အတန်းမြင့်ကာ လူချမ်းသာတစ်ယောက်မှန်းသိသာလှသည်။ အနည်းငယ်ညိုသော်လည်း စိုပြေလှသောအသားအရည်က နိုင်ငံခြားမင်းသမီးတွေလိုပင် ကြည့်ကောင်းလှသည်။ ဒီမိန်းမက ကိုကိုနှင့်ဘယ်လိုပတ်သက်နေပါလိမ့်ဟု ဖြူငယ်စဉ်းစားနေတုန်းမှာပင် ရှတတချိုမြမြအသံရှိသော သူမကခပ်ပြုံးပြုံးဖြင့်စကားစသည်။ “တို့နာမည် ဆွီတီပါ ဖြူငယ်အေးချမ်း” “ဟုတ်ကဲ့ ” ဖြူငယ်အလိုက်သင့်ပြန်ပြောရင်းကမ်းပေးသောလက်ကိုဆွဲခါနှုတ်ဆက်လိုက်သည်။
ဆွီတီက သူမကို ပြုံးကြည့်နေရင်း “ကိုမင်းက အရွေးတော်တာပဲ မင်းကြည့်ရတာ တော်တော်ငယ်အုံးမဲ့ပုံပဲ ” ဆွီတီ့စကားကဘာအဓိပါယ်မှန်းမသိသော်လည်း သူမ၏အပြုံးကို ဖြူငယ်မကြိုက်ပါ။ ခင်မင်ရင်းနှီးလိုသော အပြုံးမျိုးမဟုတ်ဘဲ အထက်စီးဆန်ကာ အနိုင်ယူလိုသော အပြုံးမျိုးဟု ဖြူငယ်ထင်မိသည်။ “အမ ပြောစရာရှိတာပြောပါ ဖြူငယ်သိပ်အချိန်မရလို့ပါ” ဆွီတီက ခပ်မြူးမြူးတစ်ချက်ရယ်လိုက်ပြီး “အိုး…ဟုတ်တာပေါ့ မင်းကြည့်ရတာ အလုပ်သိပ်များပုံရတယ်… တို့လိုရင်းကိုပဲပြောတော့မယ်… မင်းသစ်နဲ့မင်း ချစ်သူတွေမဖြစ်ခင်တုန်းက သူ့မှာမိန်းမတွေဘာတွေရှိလားလို့များ မင်းစုံစမ်ဖူးသလား မေးခဲ့ဖူးသလား ” ထိုစကားကိုကြားလိုက်ရသောဖြူငယ်မှာ အလွန်တုန်လှုပ်ကာ ဟန်မဆောင်နိုင်ပဲအကြီးအကျယ် မျက်နှာပျက်သွားရသည်။ ကိုကို့မှာ မိန်းမရှိသလား.. သူတစ်ခါမှတောင်မစဉ်းစားမိဖူးပါ…..ဖူငယ်နိုးလာတော့ မျက်ရည်တွေက ခေါင်းအုံးပေါ်စိုနေတုန်းပင်ဖြစ်သည်။ ငိုရင်းရှိုက်ရင်းအိပ်ပျော်သွားခဲ့သည်မှာ သိပ်တော့မကြာလောက်သေးပါ။ ဆွီတီဆိုသော မိန်းမ၏ စကားတွေကို သူမပြန်လည်ကြားယောင်ရင်း မျက်ရည်တွေ ကျလာရပြန်သည်။ “တို့ကတစ်ချိန်က မင်းလိုပဲ ကိုမင်းရဲ့ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ဖူးတာပေါ့…….ချစ်သူဆိုတာထက်ပိုပါတယ်….. လက်ထပ်ဖို့အထိလည်း ရည်ရွယ်ထားခဲ့တယ်……တို့အလုပ်လုပ်တဲ့ company ကလွှတ်လို့ နိုင်ငံခြားရုံးခွဲကို ထွက်သွားရတယ်……… ကိုမင်း တို့ကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတာတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ….သူအလုပ်တွေနဲ့ မအားလို့ပဲ ထင်မိတာ…… အချိန်တွေကြာလာလို့ စုံစမ်းကြည့်တော့မှပဲမင်းအကြောင်းကို သိရတော့တယ်… တို့နိုင်ငံခြားမှာနေတုန်း တစ်ခါမှသူ့အပေါ်သစ္စာမဖောက်ခဲ့ဖူးဘူး… သူဒီလိုလုပ်မယ်လည်းမထင်မိဘူးလေ… မင်းအနေနဲ့လည်း ကိုယ့်ကိုလာချဉ်းကပ်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်အကြောင်းကို အရင်စုံစမ်းပြီးမှ ယုံဖို့ ကောင်းတယ်နော်…… ဒါပေမဲ့ မင်းသိထားရက်နဲ့ မသိချင်ယောင်ဆောင်တာဆိုရင်တော့ တို့မပြောတတ်ဘူး……. မင်းရုပ်ရည်လေးနဲ့ဒီလိုမလုပ်လောက်ဖူးလို့တို့ယုံချင်ပါတယ်……..တို့ခံစားချက်တွေကိုလည်းမိန်းကလေးချင်းမို့ မင်းနားလည်ပေးနိုင်မယမျှော်လင့်ပါတယ်……. ” ဖြူငယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြင့် ထထိုင်လိုက်ခါ အခန်းထဲမှထွက်လာခဲ့သည်။ အိမ်ရှေ့ခန်းမှာထိုင်ပြီး မင်းသစ်ပြန်အလာကို စောင့်သည်။ ဒီတစ်ခါမင်းသစအိမ်အပြန်ကိုစောင့်ရသည်မှာ ဘ၀မှာအကြာဆုံးဟုတောင် ထင်မိသည်။ ဖြူငယ့်ပါးပြင်က မျက်ရည်တွေခြောက်ပြီး အချိန်တော်တော်ကြာစဉ်းစားပြီးချိန်မှ မင်းသစ်ပြန်ရောက်လာလေသည်။ “ဖြူလေး….. အောက်မှာဒေါ်ပုပြောနေတယ် နေ့ခင်းထဲကဘာမှမစားဘဲအိပ်နေတယ်ဆို….. အပြင်ကစားလာလို့လား….ဟင်……” ဖြူငယ့်ကို ထိုင်နေတာမြင်သောမင်းသစ်ကလှမ်းပြောရင်းလှေကားမှတက်လာကာ အနီးရောက်တော့ ငိုထားရလွန်းလို့ဖောင်းအစ်နေသောမျက်နှာကိုတွေ့ကာပြောလက်စ စကားရပ်သွားသည်။
“ဖြူလေး ငိုထားတာလား ဘာဖြစ်တာလဲ…..ကိုကို့ကိုပြောပါအုံး ဘာဖြစ်လို့လဲဟင် ” တုန်ရီနေသောအသံကိုထိန်းကာ ဖြူငယ်အားတင်းလိုက်ရင်း… “ကိုမင်းသစ် ကျမရှင့်ကိုမေးစရာတွေရှိတယ်………ရှင်လိမ်ဖို့ညာဖို့မကြိုးစားဘဲအမှန်အတိုင်းဖြေပေးပါ…………”အင်းလျားကန်ဘောာင်ရှိခုံတန်းလျားတစ်ခုပေါ်ဝယ်……… “ကဲ..မိဖြူ….နင်ဒီလိုမျက်ရည်စမ်းစမ်း စမ်းစမ်းလုပ်နေရင် ငါသွားတော့မယ်” ဖြူငယ်က ကျော်ဘုန်းနေခန့်ကိုမျက်စောင်းထိုးလိုက်ရင်း……. “ငါ့ဘာသာငိုတာ နင့်ကိုလိုက်ငိုခိုင်းတာမှမဟုတ်တာ အဖော်မရှိလို့နင့်ကိုခေါ်လာတာ….အေးဆေးနေစမ်းပါဟာ” “ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာ နဲနဲပါးပါးပြောအုံးလေဟာ…ငါကဘုမသိဘမသိနဲ့လိုက်လာပြီးဒီတိုင်းကြီးနေနေရတာ မဟုတ်သေးပါဘူး……..” ကျော်ဘုန်းနေခန့်ကိုဖြစ်ကြောင်းကုန်စဉ်ပြန်ပြောပြဖို့ ဖြူငယ့်ခေါင်းထဲမှာ အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်သည်။ ပြန်စဉ်းစားမိတိုင်းဖြူငယ့်နားတွေခါးလှပါသည်။ အသည်းတွေလည်းနာလွန်းလှပြီ။ အချစ်ဦးပေးသော အတွေ့အကြုံက ခါးသီးလွန်းလှသည်။ ဆွီတီနဲ့တွေ့ပြီးချိန်ထိ သူမရင်ထဲမှာမျှော်လင့်ချက်လေးကျန်နေသေးသည်။ ဒီမိန်းမပြောသလို ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာ။ ကိုကိုနဲ့ပြတ်ပီးသားရည်းစားဟောင်းကငါတို့ကိုပြသနာတက်စေချင်လို့ တမင်လာပြောတာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ ကိုကိုက ဒီလိုလုပ်မဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်လောက်ပါဘူး…စသဖြင့် စိတ်အားတင်းကာ နေနေရသည်။ သို့သော် မင်းသစ်၏စကားများက သူမမျှော်လင့်ချက်အားလုံးကို ပြိုလဲစေခဲ့သည်။ “ဆွီတီနဲ့ကိုယ်နဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ဖူးခဲ့ကြတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ် ……ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဘက်ကစခဲ့တာမဟုတ်ဘူး…..သူကကိုယ့်အပေါ်ကောင်းလွန်းတော့ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဘက်အဖြစ် ရွေးဖို့ ဆုံးဖြတ်မိတာပါ….. ကိုယ်သူ့ကိုမချစ်ခဲ့ဘူး……ဖြူလေးနဲ့တွေ့မှအချစ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကြီး သိလာခဲ့တာ…….. ကိုယ်သူ့ကိုဖြတ်ဖို့စဉ်းစားခဲ့တယ်….. ဒါပေမဲ့မပြောရက်ခဲ့ဖူးဖြူလေးရယ်…ကိုယ့်အားနည်းချက်ပါ.. အဲဒါကြောင့် ဒီတိုင်းအဆက်အသွယ်ဖြတ်လိုက်ရင် သူလည်းသွေးအေးပြီး မေ့သွားမယ်အထင်နဲ့ ထားလိုက်တာပါ… ကိုယ်ဖြူလေးကိုပဲတကယ်ချစ်တာ….ဖြူလေးကိုပဲလက်ထပ်မှာ….ဘယ်သူဘာပြောပြော အဲတာအမှန်တရားပဲ… ” ဖြစ်ပျက်သမျှအားလုံး ကျော်ဘုန်းနေခန့်ကိုဖြူငယ်ပြောပြလိုက်တော့ သူကစီးကရက်တစ်လိပ်ကိုမီးညှိရင်း သက်ပြင်းကိုချသည်။ “ဆွီတီ ပြန်ပေါ်လာတာကိုး……” ဖြူငယ်တအံ့တသြဖြင့်……. “နင်..နင်သူ့ကိုသိတယ်ဟုတ်လား……နင် ကိုကို့မှာချစ်သူရှိမှန်းသိရဲ့သားနဲ့ ငါ့ကို ဘာလို့မပြောခဲ့တာလဲ ကျော်ဘုန်းနေခန့်” ဖြူငယ့်ဒေါသအမေးကို ကျော်ဘုန်းနေခန့်ကအေးအေးဆေးဆေးပင်ပြန်ဖြေလိုက်သည်။ “အရင်က သူအိမ်ကိုခဏခဏလာဖူးတယ်…ကိုမင်းသစ်ချစ်သူအဖြစ်နဲ့ပေါ့…… နောက်တော့ သူပျောက်သွားတာ တစ်နှစ် နှစ်နှစ်တောင်မကတော့ဘူးထင်တယ်…နင်အိမ်ကိုရောက်လာကာစတည်းကပဲ……. ကိုမင်းသစ်နဲ့သူ ပြတ်သွားကြပြီလို့ပဲငါထင်တာပေ့ါ…… ငါသေသေချာချာမသိတဲ့သူ့အကြောင်းနင့်ကိုပြောရင် ကိုမင်းသစ်က ငါ့ကိုဘယ်လိုထင်မလဲ…… အဲဒါကြောင့်ပါဟာ.. စိတ်မဆိုးပါနဲ့” မစူးစမ်းမဆင်ခြင်ပဲ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ဇွတ်မှိတ်ပြီးချစ်မိသည့် သူမကိုယ်သူမသာ အပြစ်တင်ရန်တတ်နိုင်ပါတော့သည်။
အခုတော့ ဖြူငယ် ဒုတိယလူဖြစ်ပြီ။ သူများရည်းစားကို လုယူသော မိန်းကလေးအဖြစ် သူမကိုယ်တိုင်ပင်မသိလိုက်ဘဲ တံဆိပ်ကပ်ခံခဲ့ရပြီ။ မိန်းမသားချင်းစာနာကာ သူမအလွန်ချစ်သော ကိုကို့ကို စွန့်လွှတ်ပြီးနောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ရမှာလား……….ကိုကို့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောပြီး ရှေ့ဆက်တိုးရမှာလား ဝေခွဲမရသည့်အကြောင်းကို ကျော်ဘုန်းနေခန့်အားတိုင်ပင်ကြည့်မိတော့…. “ငါကတော့ ဘယ်သူမှန်တယ်မှားတယ်မပြောချင်ဘူးဟာ…..ကိုမင်းသစ်ပြောတာတွေလည်း ဟုတ်တော့ဟုတ်မယ်ထင်တယ်…အရင်တည်းက မဆွီတီက သူ့ကိုတဖက်သတ်ဖြစ်နေသလိုပဲ အရမ်းသည်းသည်းလှုပ်တာ….သူကအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူး……. သူနင့်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်…….ငါကိုမင်းသစ်ဘက်ကလိုက်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး ယောက်ျားတွေရဲ့ ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘာဝကို ပြောပြတာ…….နင့်ကိုအကြံပေးချင်တာကတော့နင့်ကံကြမ္မာကို နင်ကိုယ်တိုင်ပဲစီရင် နင့်လက်ထဲမှာပဲနင်ထား…..” ဖြူငယ်ဇဝေဇ၀ါဖြင့်ပြန်မေးလိုက်သည်။ “နင်ပြောတာငါနားမလည်ဘူးကျော်ကျော်” ကျော်ဘုန်းနေခန့်စီကရက်ကိုထပ်ဖွာလိုက်ရင်း…. “ဒီလိုဟာ…… နင်တို့မိန်းကလေးတွေအများစုက ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို အရမ်း ချစ်မိပြီဆိုရင် နင့်တို့ရဲ့ အချစ်တွေ၊ ဘ၀တွေ၊ အကုန်ပုံအပ်ပစ်လိုက်ကြတယ်…..ကိုယ်မလုပ်ချင်ရင် မဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေတောင်မှ ကိုယ့်ချစ်သူက အတင်းတောင်းဆိုရင် လုပ်ပေးလိုက်တာမျိုး…..အဲဒီကနေမှ နင်တို့မဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတာပဲ…… အဲဒါနင်တို့ကံကြမ္မာကို သူများလက်ထဲ ထည့်ထားတာပေါ့…… အခုဆို နင်နဲ့မဆွီတီက ကိုမင်းသစ်ရွေးချယ်ခံရမှာကို စောင့်နေတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ယောက်လိုပဲ……. နင်တို့ကံကြမ္မာကို သူကို့အဆုံးအဖြတ်ပေးခိုင်းမှာလား…..နင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်မှာလား…….. တကယ်လို့ နင်သူနဲ့ မခွဲနိုင်လို့ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ကိုယူမယ်ဆိုရင် အဲဒါနင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်တာပဲ…..အဲလိုမဟုတ်ဘဲ နင်က နောက်ဆုတ်ပေးချင်တဲ့စိတ်ရှိပေမဲ့ ကိုမင်းသစ်ကနင့်ကိုပဲချစ်လို့ လက်ထပ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကို နင်လိုက်လျောပေးလိုက်တာ ဆိုရင် သူဆုံးဖြတ်တာကို နင်နာခံလိုက်တာပဲ…….. နင်နားလည်လား…….” “အင်း…..နားလည်သလိုလိုပဲ” “အေး..ဒါဆိုသွားရအောင်…ငါလည်ှးဗိုက်ဆာနေပြီ….” ဖြူငယ်တို့ပြန်ရောက်ချိန် မင်းသစ်ကအိမ်မှာရှိမနေပါ။ ဆွီတီ့တိုက်ခန်းမှာရောက်နေသည်။ မင်းသစ်ကိုမြင်မြင်ချင်းပဲ ဆွီတီက ပြေးဖက်သည်။
ဆံပင်ကိုနဖူးအပြောင်သိမ်းပြီး နောက်မှာခပ်မြင့်မြင့်စည်းထားသောပုံစံ၊ ညိုမှောင်တောက်ပသော မျက်ဝန်းများ၊ အိမ်နေရင်းတောင် အနီရဲရဲဆိုးထားသော နှုတ်ခမ်းပါးပါးများဖြင့် ဆွီတီသည် အရင်တုန်းကလိုပဲ ဘာမှပြောင်းလဲမသွားပါ။ မင်းသစ်ဘာမှမပြောရသေးခင်မှာပင် ဆွီတီကစပြီး……. “ကိုမင်း…နဲနဲပြည့်လာတယ်နော်… စိတ်ချမ်းသာတယ်ထင်တယ်” ဆွီတီ၏ရိသဲ့သဲ့အပြုံးကို မင်းသစ်ရင်မဆိုင်ဘဲမျက်နှာလွှဲရင်း ပြောလိုက်သည်။ “ကိုယ်မင်းဆီပြောစရာရှိလို့လာတာ ဆွီတီ… ” ဆွီတီက မင်းသစ်ဘေးနားသို့ပူးပူးကပ်ကပ်လာထိုင်ရင်း မင်းသစ်၏ခါးကိုသိုင်းဖက်လိုက်ပြီးသူမ၏မူပိုင် ချိမြရှတသောအသံတိုးတိုးဖြင့်…. “ပြောစရာရှိတာနောက်မှပြောကွာ…..ဆွီတီကို့ကိုအရမ်းလွမ်းနေတာ….အလွမ်းဖြေပါရစေအုံး” ကိုယ်လုံးချင်းနီးကပ်နေတော့ ဆွီတီ့ ရေမွှေးနံ့သင်းသင်းက မင်းသစ်နှာခေါင်းဝနား ပျံ့လွင့်လာသည်။ ကြယ်သီးနှစ်လုံးခန့် ဖြုတ်ထားသော ရှပ်အကျီဖြူဖြူအောက်မှ ဖောင်းကြွနေသော ရင်သားများနှင့် အနက်ရောင်ဘရာစီယာကို လှမ်းမြင်နေရသည်။ မင်းသစ်ဘာမှမပြောနိုင်ခင်မှာပင် ဆွီတီက သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို လှမ်းနမ်းလိုက်သည်။ ဆွီတီ့အနမ်းတွေက အရင်လိုပဲ ကြမ်းတုန်းပင်။ မင်းသစ်၏အပေါ်နှုတ်ခမ်းအောက်နှုတ်ခမ်းများကို တစ်လှည့်ဆီ ဆွဲစုပ်ယူပြီး သူမ၏လျှာချွန်ချွန်လေးက မင်းသစ်ပါးစပ်ထဲအထိ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာသည်။ မင်းသစ်က လူချင်းခွဲရန်သူမပုခုံးများအားဆုပ်ကိုင်လိုက်ချိန်တွင် ဆွီတီက နမ်းနေရင်းကပင် ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုဆိုဖာပေါ် တင်ကာကိုယ်ကိုလှည့်လိုက်ပြီး မင်းသစ်ကိုယ်ပေါ်သို့ ခွထိုင်လိုက်၏။ မင်းသစ်၏ခေါင်းများက ဆိုဖာနောက်မှီနှင့်ထိမိနေသည်။ ဆွီတီက အပေါ်မှနေပြီး မင်းသစ်ခေါင်းအားလက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ညှပ်ကိုင်ကာ ရမက်ပြင်းသောအနမ်းများကို ဆက်တိုက်ခြွေနေသည်။ တက်ထိုင်ထားသဖြင့် သူတို့နှစ်ဦး၏ပစ္စည်းများက အ၀တ်များခံနေသော်လည်းထိမိကြသည်။ ဘောင်းဘီတိုပွပွလေးဝတ်ထားသောဆွီတီကလည်း တမင်ပင် တင်ပါးကိုရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ခါ ပွတ်သပ်နေသဖြင့် စတိုင်ဘောင်းဘီအောက်မှ မင်းသစ်၏ပစ္စည်းသည် ဖုဖုဖောင်းဖောင်းကြီးဖြစ်လာသည်။ မင်းသစ်၏ အသိဥာဏ်က အထိအတွေ့ကိုအရှုံးပေးလိုက်ရလေပြီ။ ဒါကိုသိသောဆွီတီက နှုတ်ခမ်းချင်းခွာလိုက်ပြီး မင်းသစ်ကို ခပ်ပြုံးပြုံးစိုက်ကြည့်ကာ သူမ၏တီရှပ်အကျီကြယ်သီးများကို တစ်လုံးချင်းဖြုတ်လိုက်သည်။ ထွားကြိုင်းလှသောရင်သား ၀င်းဝင်းမို့မို့သည် အနက်ရောင်ဘရာစီယာနှင့်လိုက်ဖက်လွန်းစွာထွက်ပေါ်လာသည်။
တစ်ခဏအတွင်းမှာပင် သူတို့နှစ်ဦးလုံး၏ကိုယ်မှာ အ၀တ်ကင်းမဲ့သွားတော့သည်။ မင်းသစ်ကိုခွထိုင်ထားရင်းက ဆွီတီသည် သူမ၏ပေါင်ကြားကို ထောင်မတ်နေပြီဖြစ်သောမင်းသစ်ပစ္စည်းဖြင့်တည်တည့်ချိန်ကာ ထိုင်ချလိုက်တော့…. “အား………ရှီးးးးး” ကောင်းလွန်းလှသောကာမအရသာကို သူတို့နှစ်ဦးလုံးခံစားလိုက်ရကြောင်းမျက်နှာများကပေါ်လွင်နေသည်။ ဆိုဖာနောက်မှီကိုကိုင်ကာ တင်ပါးဝိုင်းဝိုင်းကြီးကို ရှေ့တိုးနောက်ငင်လှုပ်ရှားတော့ ရင်သားတင်းတင်းထွားထွားကြီးတွေကလည်း စည်းချက်ညီညီပင် မင်းသစ်မျက်နှာရှေ့မှာ ယိမ်းကနေကြသည်။ ဆွီတီက အလွန်ရမက်ပြင်းထန်စွာဖြင့် မင်းသစ်မျက်လုံးများကိုစိုက်ကြည့်ရင်း သူမရင်သားတွေကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဆုပ်နယ်ကစားပြနေသည်။ မင်းသစ်လည်းရမက်စိတ်များထကြွလာပြီး သူမရင်သားများကို လက်ဖြင့်ဆုပ်ညှစ်ရင်းစို့လိုက်သည်။ တစ်ဖက်ကို ပါးစပ်ဖြင့် စို့ထားရင်း နောက်တစ်ဖက်ကကော့တင်းနေသော နို့သီးလေးကို လက်ညိုးလက်မတို့ဖြင့် ဆွဲကာချေပေးလိုက်တော့ ဆွီတီ့ထံမှ ညည်းသံ ကျယ်ကျယ်ထွက်ပေါ်လာတော့သည်။ “အား…ကောင်းတယ် ကို..အဲလိုစို့ပေး…အင်း…” ဆွီတီ၏တင်ပါးများကလည်းကော့ထိုးလိုက်စကောဝိုင်းလိုက်နှင့် လှုပ်ရှားမှုတွေပိုမိုမြန်ဆန်လာသည်။ မင်းသစ်က အားမရနိုင်ပဲ တင်ပါးနှစ်ဖက်ကိုလက်ဖြင့်ကိုင်ကာဖြစ်ညှစ်ရင်း ရှေ့တိုးနောက်ငင်ပြုကာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့်ပေးလိုက်တော့ ဆွီတီ၏ အင်္ဂါစေ့လေးက မင်းသစ်ဆီးခုံနှင့်မိမိရရကြီးဖိပွတ်မိနေပြီး တအီးအီးတအားအားနှင့် ညည်းညူအော်ဟစ်နေရသည်။ “အင်း….အဲလိုမျိုးဆက်ဆောင့်…….အိုးး….အဲလိုမျိုးလုပ်ကွာ….အားးး အင်းးး” မင်းသစ်လက်မောင်းအားသုံးပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးငါးဆယ်ခါလောက်ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ ဆွီတီ့ကိုယ်လေး ဆတ်ခနဲ တုန်ခါသွားပြီး ပျော့ကျသွားသည်။ သူက မပြီးသေးသဖြင့် ဆွီတီ့ကိုမကာ ဆိုဖာပေါ်တင်လိုက်ပြီး ပေါင်နှစ်ခြမ်းကိုဖြဲကာ အခါနှစ်ဆယ်လောက်ဆက်ဆောင့်ပစ်သည်။ ဆွီတီခမျာ အော်ပင်မအော်နိုင်တော့။ သုတ်ရေများ ဆွီတီ့ဗိုက်ပေါ်ပန်းထည့်လိုက်ပြီးချိန်တွင် မင်းသစ်လည်းအသက်အနိုင်နိုင်ရှူကာ ဆိုဖာပေါ်အရုပ်ကြိုးပျက် လှဲချလိုက်လေသည်။“ဟဲ့ မိဖြူ….နင်ငိုနေပြန်ပြီလား…နင်ကလည်းဟာ” ကျော်ကျော့်မေးသံကြောင့်ဖြူငယ်သတိပြန်ဝင်လာတော့ ၀ရံတာရှိခုံပေါ်ထိုင်ရင်း မျက်ရည်တွေပါးပြင်ပေါ်မှာစိုစွတ်နေတာ သူမကိုယ်တိုင်ပင်မသိလိုက်ပေ။ “ရော့…ငါဘီယာသောက်မလို့ယူလာတာ နင်လည်းသောက်လိုက်…နဲနဲသက်သာသွားလိမ့်မယ်” ဖြူငယ်ဘာမှမစဉ်းစားတော့ဘဲ ဘီယာတစ်ဘူးယူကာဖောက်သောက်လိုက်သည်။
ကုန်သွားတော့ ကျော်ကျော်က ထပ်ယူပေးသည်။သောက်ရင်းစကားပြောရင်းဖြင့် အချိန်တော်တော်ကြာတော့ ဘယ်နှဘူးမြောက်မှန်းမသိသော ဘီယာကိုဖြူငယ်လက်လှမ်းလိုက်ချိန်တွင် ကျော်ကျော်ကလှမ်းတားလိုက်သည်။ “တော်တော့ မိဖြူ…နင်များနေပြီ…ခေါင်းကိုက်လိမ့်မယ်” ဖြူငယ်က ကျော်ကျော့်လက်ထဲကဘူးကို လိုက်လုရင်း… “နင်ကလည်းဟာ တိုက်တုန်းကတိုက်ပြီးတော့…ငါခုမှကောင်းတုန်းရှိသေးတာကို… ငါ့ကိုမသောက်တတ်ဖူးမှတ်လို့လား…. ငါကိုကိုနဲ့ခဏခဏသောက်ဖူးပါတယ်ဟ…” “အေးပါ..ငါသိပါတယ် နင်ဒီနေရာကြီးမှာအိပ်ပျော်သွားရင် ငါနင့်ကိုထမ်းပြီးအခန်းထဲမပို့နိုင်ဘူးဟ အဲဒါကြောင့်ပြောတာ…ငါလည်းနည်းနည်းမူးနေပြီ” ဖြူငယ်တစ်ယောက်မင်းသစ်အကြောင်းထည့်ပြောမိပြီးမှ မျက်ရည်များဝိုင်းလာပြန်သည်။ “ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျော်ကျော်ရယ်….ငါလေ..ကိုကိုနဲ့ဒီအခြေအနေတွေရောက်ပြီးမှ လမ်းခွဲချင်ဘူး… ဒါပေမဲ့လေ ……. မဆွီတီလည်းအဲလိုပဲစဉ်းစားမှာပဲနော်…….” ကျော်ကျော်သက်ပြင်းချလိုက်ရင်း…….. “နင် လိင်ကိစကိုပြောတာလား ဒီအခြေအနေဆိုတာ… ဒီခေတ်မှာဒါမျိုးတွေမဆန်းပါဘူးဟာ…… အဲဒီ့ကိစ္စကြောင့် လမ်းမခွဲချင်ဘူးဆိုတာတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး” ဖြူငယ်က ခေါင်းရမ်းလိုက်ရင်း……… “အဲလိုလည်းမဟုတ်ဘူး..ဒါပေမဲ့ ငါသူ့ကိုအစွမ်းကုန်လိုက်လျောခဲ့တယ်…ကိစ္စတစ်ခုကလွဲရင်ပေါ့…. အဲဒါကလွဲရင် ကျန်တာတွေ ငါအကုန်လိုက်လျောခဲ့တယ်ဟာ…သူကျေနပ်အောင်ငါဟန်ဆောင်ပေးခဲ့ရတာတွေလည်းရှိတယ် ခုကျတော့ ငါ့ကိုယ်ငါအရှက်မရှိသလိုပဲ ငါနောင်တရမိတယ်” “ဘယ်ကိစ္စကလွဲရင်လဲ……. နင်ကဘာတွေဟန်ဆောင်တာလဲ……. ” စိတ်ဝင်တစားမေးပြီးမှ ကျော်ကျော်ကိုယ်ရှိန်သတ်လိုက်ခါ “အဲ..ဆောရီးဟာ…နင်မဖြေချင်လည်းရပါတယ်…ငါသိချင်စိတ်လောသွားလို့မေးမိတာ” “ရပါတယ်…နင်နဲ့ငါက အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေပဲ…. ငါက သူနဲ့လက်မထပ်ခင်အထိ အပျိုဘ၀နဲ့နေချင်တယ်လို့ တောင်းဆိုထားလို့ သူနဲ့ငါ အဆုံးစွန်ထိတော့မရောက်ကြသေးဘူး…လက်တွေပါးစပ်တွေပဲ သုံးတယ် အဲဒါကိုပြောတာပါ…. ” ဖြူငယ်က ရှက်သလိုခေါင်းငုံ့ရင်းအသံတိုးတိုးဖြင့်ဖြေလိုက်သည်။ “ဟို..ဟန်ဆောင်တယ်ဆိုတာကရော” “အဲဒါကဟာ…သူကငါ့ကိုပြီးပြီလားဆိုပြီး အမြဲမေးတယ်…. တကယ်တော့ ပြီးတယ်ဆိုတာဘာမှန်းတောင်ငါမသိဘူး..တစ်ခါမှလည်းမပြီးဖူးဘူး ဒါပေမဲ့ သူကျေနပ်အောင်ငါဟန်ဆောင်ပြီး ဖြေခဲ့တာ….” “နင်တကယ်ပဲပြီးတယ်ဆိုတာကို မသိတာလား မိဖြူ” “ငါ စာတွေထဲမှာတော့ဖတ်ဖူးပါတယ်..ကြည့်လည်းကြည့်ဖူးတယ်… ဒါပေမဲ့တစ်ခါမှမခံစားဖူးလို့အဲဒီအရသာကို မသိဘူးလို့ပြောတာ” ဖြူငယ်လေသံယဲ့ယဲ့လေးနှင့်ပြန်ဖြေလိုက်တော့ ကျော်ကျော်တော်တော်သနားသွားသည်။
ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးလည်း ရှိပါသေးလားဟု သူအံ့သြမိသည်။ “ဖြစ်ရတယ်မိဖြူရယ်…ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသူ့ကိုပြောပြလိုက်ပေါ့ …” ပြောရင်းဆိုရင်းရှက်လာလို့လားမသိ။ ဖြူငယ်က ထထိုင်လိုက်သည်။ “တော်ပြီဟာ ဆက်မပြောချင်တော့ဘူး…ငါသွားအိပ်တော့မယ်” ခြေလှမ်းလှမ်းလိုက်တော့ ယိုင်နဲ့သွားပြီး ကျော်ကျော့်ပခုံးကိုလှမ်းကိုင်လိုက်ရသည်။ “တွေ့လား ငါပြောသားပဲ …လာလာ ငါ့လက်ကိုတွဲထား လိုက်ပို့မယ်နင့်အခန်းကို” နှစ်ယောက်သားဒယိမ်းဒယိုင်ဖြင့် အခန်းထဲကိုရောက်လာသည်။ ဖြူငယ်တစ်ခုခု မှားနေသလိုခံစားရတာနဲ့ ကြည့်လိုက်တော့ သူ့အခန်းမဟုတ်။ “ဟင် ငါ့အခန်းလည်းမဟုတ်ဘူး နင့်အခန်းကြီး… ကောင်စုတ်နင်ငါ့ကိုဘယ်ခေါ်လာတာလဲ” ကျော်ကျော်လည်း ဒီတော့မှ ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်ရင်း “အေး ဟုတ်သားပဲ မြင်ဖူးပါတယ်လို့ကြည့်နေတာ… ငါ့အခန်းကြီးကိုးး ဟီးဟီးး.. ငါလည်းမူးနေလို့ပါဟာတမင်ဟုတ်ပါဝူး ဆောရီး” နှစ်ယောက်သား အခန်းမှားလာသည့်အဖြစ်ကိုတွေးရင်း တိုင်ပင်မထားဘဲ ရီမိကြသည်။ ဖြူငယ့်ကိုကြည့်ပြီးရီနေသော ကျော်ကျော် ရုတ်တရက်အရီရပ်လိုက်ပြီး သူမကိုပွေ့ချီလိုက်ကာ သူ့ကုတင်ဆီသို့ခြေလှမ်းလိုက်သည်။ “ကျော်ကျော် နင်ဘာလုပ်မလို့လဲ” ကျော်ကျော်က လေသံတိုးတိုးဖြင့် “အသာနေစမ်း နင့်ကိုပြစရာရှိလို့ ” ဖြူငယ့်ကိုကုတင်ပေါ်အသာပွေ့ချီချလိုက်ပြီး သူ၏ကိုယ်ကိုအုပ်မိုးကာ ဖြူငယ်မျက်နှာလေးအား နေရာအနှံ့နမ်းရှုံ့လိုက်သည်။ “ကျော်ကျော်..နင်ဘာလုပ်…” ပလုံးပထွေးပြောနေသော ဖြူငယ့်နှုတ်ခမ်းများကို ကျော်ကျော်နှုတ်ခမ်းတွေနှင့်ညင်သာစွာပိတ်ပေးလိုက်သည်။ သောက်ထားသောဘီယာအရှိန်ကြောင့် နှစ်ယောက်လုံး၏နှလုံးခုန်သံတွေက ရင်ထဲမှာ တဒိန်းဒိန်းကျယ်လောင်စွာ မြည်ဟီးနေသည်။ အမှန်ဆိုကျော်ကျော်ကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေလုပ်လို့လုပ်နေမိမှန်းမစဉ်းစားတတ်တော့။ ဖြူငယ့်ကိုယ်ပေါ်ကအ၀တ်အစားတွေကို ခပ်မြန်မြန်ပင်ချွတ်လိုက်သည်။ ဖြူငယ်က ဘာကိုမှမငြင်းဆိုသော်လည်း ရှက်သွေးဖြာနေဟန်ဖြင့် ကိုယ်ကို တစ်စောင်းလေးကွေးထားပြီး ပေါင်တံတွေကိုစိကာ ရင်သားတွေကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။ ကျော်ကျော်ဘာမှပြောမနေတော့ဘဲ လက်တွေကိုဖယ်ကာ ရင်သားဖြူဖြူဖောင်းဖောင်းများကို အုပ်ကိုင်လိုက်ရင်း အသာဖြစ်ညှစ်ပေးနေသည်။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ကိုင်ဆွဲကာ ဆော့ကစားပေးတော့ ဖြူငယ်မျက်နှာလေးမဲ့ကာ ညည်းညူသံများထွက်လာရသည်။ “အီးးးးးးးး ကျော်ကျော်ရယ်” ကျော်ကျော့်လက်တစ်ဖက်က ၀မ်းဗိုက်သားများကိုထိပွတ်သွားပြီး အဓိကနေရာဖြစ်သော အကွဲကြောင်းလေးဆီ ဦးတည်ကာသွားနေ၏။ လက်ဖ၀ါးနှင့်အသာအထက်အောက်ပွတ်သပ်ပေးလိုက်တော့ အရည်ကြည်များစိမ့်ထွက်လာပြီး သူ့လက်မှာစိုတိုတိုဖြစ်လာသည်။
သည်တော့မှပေါင်နှစ်ချောင်းကိုဟိုဘက်ဒီဘက်နဲနဲစီဖြဲကားလိုက်ပြီး လက်ခလယ်ကိုလက်တစ်ဆစ်ခန့် အကွဲကြောင်းတည့်တည့်မှာထိုးပြီး စုန်ချီဆန်ချီလှုပ်ရှားလိုက်သည်။ ကာမအရသာဖူး အစိလေးဆီသို့အရောက်တွင် ဖြူငယ့်ထံမှ အိခနဲအသံထွက်လာသည်။ ကျော်ကျော့်အတွေ့အကြုံများအရ ဘယ်နေရာကိုအဓိကထားရမည်မှန်း သိလိုက်ကာ အစိလေးကိုလက်သုံးချောင်းလောက်ဖြင့်အသာပွတ်ဆွဲပေးလိုက်သည်။ အိပ်ယာပေါ်တွင် ပက်လက်အနေအထားဖြင့် ဒူးထောင်ပေါင်ကား ဖြစ်နေသောဖြူငယ်သည် သူမပေါင်များကိုအစွမ်းကုန်ကားထားလိုက်လေပြီ။ ကျော်ကျော်တစ်ယောက် ဖြူငယ့်ကိုယ်ပေါ်ကို ကိုယ်တစ်ခြမ်းအုပ်မိုးကာ ရင်သားများကို လျှာဖြင့် ယက်လိုက် စို့လိုက်လုပ်ရင်း အစိလေးကိုမလွတ်တမ်း လက်ဖြင့် ပွတ်ဆွဲပေးနေသည်။ ဖြူငယ်လည်း အိပ်ယာပေါ်မှတဖြည်းဖြည်းကော့တက်လာကာ ကျော်ကျော်ဆံပင်များကို လက်နှင့်အတင်းဆွဲနေတော့သည်။ “အားးးး အင်းးးး ကျော်ကျော်….မြန်မြန်လေး…လုပ်လုပ်……..အီးးး” အခါနှစ်ဆယ်သုံးဆယ်ခန့်အစိလေးကိုဖိပွတ်ပေးလိုက်သောအခါအသံပေါင်းစုံအော်ဟစ်ရင်းက ဖြူငယ်တစ်ေယောက်ကျော်ကျော့်ကိုအတင်းဆွဲကာဖက်ထားလိုက်တော့သည်။ ဆက်တိုက်လုပ်ပေးနေသော ကျော်ကျော့်လက်ကို ဖမ်းကိုင်လိုက်ရင်း.. “ရပီ……..” ဟုတစ်ခွန်းသာတိုးလျစွာပြောရင်းအမောဖြေနေတော့သည်။ တဆတ်ဆတ်တုန်နေသောပေါင်တံများကိုပြန်စိလိုက်ရင်း တစောင်းလေးဟိုဘက်ကိုလှည့်သွားသည်။ ကျော်ကျော်က သူမလှည့်သောဘက်ကို နေရာရွှေ့ထိုင်ရင်း… “နင်ပြီးသွားတာလား……ဒီတစ်ခါရောတကယ်လား fake လားးး” မျက်မှောင်ကျုတ်ရင်းမေးတော့ ဖြူငယ်က ခိခနဲတစ်ချက်ရီရင်း “တကယ်ပီးတာ……ငါ့ဘ၀မှာတစ်ခါမှဒီလိုကြီးမဖြစ်ဖူးဘူးဟာ ခုထိတုန်နေတုန်းပဲ ဘယ်လိုကြီးလည်းမသိဘူး” “ဒါပေမဲ့ နင်ကိုမင်းသစ်နဲ့တုန်းကတော့……….” ပြီးသွားပြီ ဘာညာနှင့်အော်ဟစ်နေသော့ ဖြူငယ်နှင့် ကိုမင်းသစ်တို့ အချစ်ခန်းကို သူမြင်ခဲ့ရကြောင်း ကျော်ကျော်ပြောမိတော့မလိုဖြစ်ပြီးမှ အရှိန်သတ်ရပ်တန့်လိုက်သည်။ “သူနဲ့တုန်းကဘာလို့မပြီးတာလည်းတော့ငါလည်းမပြောတတ်ဘူး ငါအမှန်အတိုင်းပြောတာ ကျော်ကျော်…….. အခုနင်နဲ့မှ အဲဒီခံစားချက်ဘာမှန်းငါသိလိုက်တာ………….” ကျော်ကျော်ကျေနပ်သွားသည်။
သူဖြစ်စေချင်တာလည်းဒါပဲမဟုတ်လား။ ကိုမင်းသစ်အကြောင်းတွေသိလိုက်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ဖြူငယ့်ကိုသူသနားသည်။ အရင်က ဖြူငယ့်ကိုစိတ်မ၀င်စားခဲ့ပေမဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောမိန်းကလေးဆိုတာတော့ သူမငြင်းနိုင်ပါ။ သို့သော် မဖြစ်နိုင်ဟုသဘောပိုက်ခါ သူငယ်ချင်းထက်မပိုအောင်သတိထားဆက်ဆံခဲ့သည်။ အခုလည်း ဖြူငယ်နှင့်ဖြစ်သွားသည်မှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုအသားယူချင်လို့ဆိုတာထက် သူမမသိသောခံစားချက်ကို သူကူညီပေးနိုင်မည်အထင်နှင့် လုပ်ပေးလိုက်မိချင်းသာဖြစ်သည်။ ဖြူငယ်က သူ့ကိုကျောပေးအိပ်နေရင်းမှ ကိုယ်လုံးလေးကိုလှည့်လိုက်ပြီး…… “နင်ပြစရာရှိတယ်ဆိုတာ ဒါလား” ဟု ခပ်ပြုံးပြုံးဖြင့်မေးလိုက်သည်။ ကျော်ကျော်က ခေါင်းညိတ်ရင်း “ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ် ဒါပေမဲ့ ကျန်သေးတယ် နင်ကြည့်ချင်သေးလား” ဖြူငယ်က မျက်ခုံးပင့်လိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းတွေကိုစုလိုက်ကာ မပွင့်တပွင့်ဖြင့် အင်း ဟု ပြောလိုက်သည်။ ကျော်ကျော်က အိပ်နေရင်းမှ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် သူ့ဘောင်းဘီကိုဆွဲချွတ်လိုက်၏။ အခုလေးတင်တွေ့ကြုံလိုက်ရသော စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာများကြောင့် သူ့ပစ္စည်းခပ်ထွားထွားကြီးက ခပ်မတ်မတ်ကြီးဖြစ်နေသည်။ ဖြူငယ်က မျက်လုံးပြူးကြည့်လိုက်ရင်း….. “ဟယ်” “ဘာဖြစ်တာလဲ……….” “ဘာမှဟုတ်ဖူး ဟိ” ကျော်ကျော်က ဖြူငယ့်ကိုစချင်လာသဖြင့်…. “ဒါကြီးကိုဘယ်လိုသုံးရတယ်ဆိုတာရော ကြည့်ချင်သေးလားဟင်” ဖြူငယ်ရုတ်တရက်ကြောက်သလိုလိုဖြစ်သွားကာ “ဟင့်အင်းဟင့်အင်း နင်နော် “ ဟုပြောရင်း မျက်စောင်းထိုးရင်းအလန့်တကြားထထိုင်လိုက်သည်။ “ အေးပါဟာ… ငါ့ကောင်ကြီးကံမကောင်းတာတော့ငါလည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ အဟင့်” ဟုပြောရင်းမျက်ရည်သုတ်ဟန် လုပ်ပြလိုက်တော့ ဖြူငယ် တစ်ခစ်ခစ်နှင့် ရီပါတော့သည်။ “အမယ်…သူ့ကျတော့လုပ်ပေးရပီး ကျုပ်ကိုကျတော့ရီတယ်ပေါ့ ဟုတ်လား ဒီကောင်မလေးတော့လေ “ အံကျိတ်ပြီးပြောလိုက်သော ခေါင်းကိုဖွဖွလှမ်းထုလိုက်သော ကျော်ကျော့်ကို ဖြူငယ်က မကြောက်ဟန်ဖြင့် လျှာထုတ်ပြောင်ပြလိုက်ရင်း “ဒါလေးများ နင် ခါတိုင်းလိုပဲ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးလိုက်ပေါ့ဟာ “ ငါတို့ကကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးစရာမလိုဘူးဟေ့….လုပ်ပေးချင်တဲ့သူတွေမှပုံလို့ ဟု ရွဲ့ပြောလိုက်ချင်သော်လည်း ကျော်ကျော်ပါးစပ်ပိတ်နေလိုက်ပါသည်။
လောလောဆယ်သူဆန္ဒရှိနေသည်က ဖြူငယ့်ကိုသာမဟုတ်လား။ ထို့ကြောင့် စသလိုနောက်သလိုဖြင့် “အေးပါဟာ ဒါပေမဲ့ မိတ်လေးတော့ဆက်ပါရစေနော် ဟီးဟီး “ ဖြူငယ်က ရုတ်တရက်မစဉ်းစားမိဟန်ဖြင့် မျက်လုံးလေးဝိုင်းကာ “ဟင်..ဘယ်လို…” ဟု မေးမည်ရှိသေး ကျော်ကျော်က ခြေမြန်လက်မြန်ဖြင့် ထိုင်နေသောဖြူငယ့်ကိုပြန်တွန်းလှဲကာ အပေါ်မှာတက်ခွနေရာယူလိုက်သည်။ ထို့နောက်သူပစ္စည်းအား ဖြူငယ့်အကွဲကြောင်းလေးနှင့်တေ့ကာ အထက်အောက်ပွတ်ဆွဲလိုက်သည်။ အထဲမထည့်သေးတာတောင် ကောင်းနေပြီဖြစ်သောကာမအရသာကို ခဏခံစားလိုက်ပြီးမှ ကျော်ကျော်က “ဒီလိုလေးပြောတာလေ “ ဟု အဖြေပေးလိုက်သည်။ ဖြူငယ်ကနားလည်သွားဟန်ဖြင့်ဘာမှမပြောဘဲ ခပ်ပြုံးပြုံးကြည့်နေသည်။ ကျော်ကျော်ကလည်းအပေါ်စီးကနေ အကွဲကြောင်းလေးကို ဖိဖိပွတ်နေရင်း သူပစ္စည်းက ဒင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ထောင်မတ်လာသည်။ ဒါကို ဖြူငယ်ကလည်းခံစားမိဟန်ဖြင့် သက်ပြင်းဖွဖွချကာ…….. “ကျော်ကျော်……..ငါတို့ဒါမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာ ငါသိပေမဲ့… ခုချိန်မှာ ငါ့ကိုလိမ်ညာထားတဲ့ မင်းသစ်ထက်စာရင် ငါ့အပေါ်ကောင်းတဲ့ နင့်ကိုပဲပေးလိုက်ချင်တယ်ဟယ်” ဘာဆိုတာထည့်မပြောသော်လည်းအခြေအနေအရသိနေပြီမို့ကျော်ကျော်တစ်ယောက် ပါမစ်ရပြီမှန်းသိလိုက်ခါ မျက်နှာဝင်းလက်သွားသည်။ “ဖြူငယ်ရယ်…..ငါနင့်ကိုလေ…ပြောစရာတွေရှိသေးတယ်သိလား…ဒါပေမဲ့ပြီးမှပဲပြောတော့မယ်နော် ဟိ” ပြောရင်းဆိုရင်းကျော်ကျော်ကရပ်ထားသောအောက်ကလုပ်ငန်းကိုပြန်စလိုက်သည်။ ထုံးစံအတိုင်း လုပ်စရာရှိတာလုပ် ကိုင်စရာရှိတာကိုင်လိုက်တော့ ဖြူငယ့်အကွဲကြောင်းလေးက ကာမရည်ကြည်များ ရွှဲရွှဲစိုလာသည်။ သည်တော့မှ ကျော်ကျော် သူ့ပစ္စည်းကိုအသေအချာဖိပြီးသွင်းလိုက်သည်။ “အ…အာ့……” ပထမဆုံးအကြိမ်ဆိုသော်လည်း လက်စလက်နရှိထားသဖြင့် ထင်သလောက်ကြီးမခက်ပါ။ တင်းကြပ်နေသော်လည်း ရှေ့ပြေးကာမရည်များကြောင့်ရှောရှောရှူရှူဖြင့် တစ်ဝက်ကျော်ကျော် လောက်ဝင်သွားသည်။ “နာရင်ပြောနော်” ကျော်ကျော်ထိုသို့ပြောလိုက်သော်လည်း နောက်ပိုင်း ဖြူငယ်ဘယ်လောက်အော်အော် အရေးမစိုက်နိုင်တော့ပါ။ အရမ်းကောင်းလာပြီကိုး။
ဖြူငယ်ကလည်းနာလို့အော်တာထက် ကောင်းတာက ပိုအလေးသာနေသည်။ နို့သီးတွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းပွတ်ချေရင်း ကိုယ်ကိုခပ်ကိုင်းကိုင်းအနေအထားဖြင့် ကျော်ကျော်က ဆောင့်နေတော့ ဒုတိယအကြိမ်တောင်ထပ်ပြီးချင်လာသည်။ ကျော်ကျော်ကလက်တစ်ဖက်ဖြင့် သူမအစေ့လေးကိုဖိပွတ်ရင်း အဆက်မပြတ်ဆောင့်နေသဖြင့် သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ဖြူငယ်ပြီးသွားရပြန်သည်။ ကျော်ကျော်လည်း စိတ်ကိုလျှော့လိုက်ကာ လေးငါးဆယ်ချက်ဆက်တိုက်ဆောင့်လိုက်ရင်း အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သွားလေပြီ။ “ညီလေး မအိပ်သေးဘူးလား………” ၀ရံတာမှာထိုင်ရင်း ဂစ်တာကိုဟိုစမ်းဒီစမ်းတီးကြည့်နေသော ကျော်ကျော့်ထံမင်းသစ်က လျှောက်လာရင်းမေးလိုက်သည်။ ကျော်ကျော်ခေါင်းညိမ့်ပြလိုက်ရင်း… “ကိုမင်းရော….အိပ်မပျော်ဘူးလား….” “အေးကွ အဲဒါကြောင့် တစ်ရှော့လောက်ကစ်မလားလို့ မင်းရော…” “အသင့်ယူလာသော ပုလင်းနှင့်ဖန်ခွက်ကိုမြှောက်ပြရင်းပြောလိုက်တော့ ကျော်ကျော်လည်း စိတ်ညစ်နေတာနှင့် အတော်ပဲဖြစ်သွားသည်။ ညီအကိုနှစ်ယောက် စကားမပြောဘဲသောက်နေရင်း အတွေးနယ်ချဲ့နေမိကြသည်။ သူတို့၏အတွေးများ တူညီနေတာကိုတော့ နှစ်ယောက်လုံးသိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ဖြူငယ် အိမ်ကထွက်သွားတာ တစ်ပတ်လောက်ရှိပြီ။ အဆောင်မှာနေမှစာမေးပွဲကိုစိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြေနိုင်မည်ဟု အကြောင်းပြသွားသည်။ ဒီကြားထဲ သူမကို လုံးဝလာမတွေ့ဖို့လည်း မင်းသစ်ကို အမိန့်ထုတ်ထား၏။ စာမေးပွဲပြီးမှ မင်းသစ်အတွက် အဖြေတစ်ခု စဉ်းစားပြီး ပြောမည်ဟု ဆိုသည်။ ဆွီတီကို စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြင့် သာယာမိသော်လည်း ဖြူငယ့်ကိုသာ လက်ထပ်မည်ဟု မင်းသစ်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ဆွီတီက ချော့လိုက်ခြောက်လိုက်ဖြင့် သူမဘက်ပါအောင် ဆွဲဆောင်နေသော်လည်း ဖြူငယ်နှင့်အမြန်ဆုံးလက်ထပ်ပြီး ဘာမဆိုရင်ဆိုင်ရန် မင်းသစ်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်။ သူ့အချစ်တွေကိုဖြူငယ်သိအောင်ပြောပြီး စာမေးပွဲပီးတာနှင့် အမြန်လက်ထပ်ဖို့မင်းသစ်စိတ်ကူးနေသည်။ ကျော်ကျော်တစ်ယောက်လည်းဒုက္ခတွေ့နေရသည်။
မင်းသစ်နှင့် ကြိုက်နေကြသည့်အချိန်မှာ သူဖြူငယ့်အပေါ် ဘယ်လိုမှသဘောမထားခဲ့တာအမှန်ပင်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ထက်လုံးဝမပိုခဲ့။ သို့သော်ဖြူငယ်နှင့် ဘီယာသောက်ကြသည့်ညက အဖြစ်အပျက်တွေအပြီး သူ့စိတ်ထဲတွင် ဖြူငယ့်အပေါ် သံယောဇဉ်တွယ်လာခဲ့သည်။ အချစ်ဟု သူ့ကိုယ်သူ ၀န်မခံချင်ဘဲ ၀န်ခံလိုက်ရသည်။ ထိုညက သူနှင့်ဖြူငယ် မိုးလင်းခါနီးအထိ နှစ်ခါလောက်ထပ်ချစ်ခဲ့ကြသေးသည်။ ထိုသို့ဖြစ်နေရင်းက ဖြူငယ့်ကို သူ့ချစ်သူတစ်ယောက်လိုပင်သဘောထားမိသည်။ သူ့ဆန္ဒထက် ဖြူငယ်ကောင်းစေဖို့သာ ဦးစားပေးလုပ်ပေးခဲ့သည်။ ဖြူငယ်ကလည်းအလိုက်သိသဖြင့် နှစ်ဦးသားအလွန်အပေးအယူမျှခဲ့ကြသည်။ သူတွဲဖူးသောမိန်းကလေးတွေနှင့်မတူတာက သူဖြူငယ့်အပေါ်သနားချစ်ဖြင့် အတတ်နိုင်ဆုံးယုယကြင်နာမှုများပေးချင်မိခြင်းသာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင်သူဖြူငယ့်ကိုချစ်သည့်အကြောင်းဖွင့်ပြောခဲ့သည်။ ဖြူငယ်က စာမေးပွဲအပြီးအထိစောင့်ခိုင်းထားသဖြင့် သူနေမထိထိုင်မသာဖြစ်နေရခြင်းပင်။ မင်းသစ်ကိုဖြူငယ်ဘယ်လောက်ချစ်မှန်းသူသိနေသဖြင့် သူသိပ်တော့အခြေအနေမကောင်းလှပါ။ ထိုအတွေးများက သူ့ရင်ကိုပူလောင်စေသည်။ ကျော်ကျော်တစ်ယောက်သူ၏ ရင်တွင်းအပူများကို ပြင်ပအပူဖြင့် ငြိမ်းလိုငြိမ်းညား ငြှိမ်းကြည့်မိနေခြင်းသာ ဖြစ်လေသည်။ စာမေးပွဲကိုကောင်းစွာဖြေဆိုနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ဖြူငယ့်စိတ်တွေလည်းပေါ့ပါးလွတ်လပ်နေသည်။ ထို့ကြောင့်သီချင်းလေး တညည်းညည်းနှင့်ပင် အလှပြင်နေသည်။ ဒီနေ့သည် သူမ အတွက်အရေးကြီးသောနေ့၊ ဘ၀နှင့်ဆိုင်သောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချရမည့်နေ့ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူမအလှဆုံးပြင်ဆင်ပြီး မင်းသစ်နှင့်ချိန်းထားသော ကော်ဖီဆိုင်လေးသို့ထွက်လာခဲ့သည်။ မင်းသစ်က စိတ်စောနေသဖြင့် နာရီဝက်လောက်ကြိုရောက်နေသည်။ သူဖြူငယ့်ကိုပြောမည့်စကားများကို စည်ကာပတ်ကုံးစဉ်းစားနေသဖြင့် ဖြူငယ်ရောက်လာတာကို ထိုင်လိုက်တော့မှသတိထားမိသည်။ အစိမ်းရောင်ရင့်ရင့် ဂါဝန်လက်ပြတ်လေးနှင့်ဖြူငယ်သည် သူမြင်ဖူးသမျှထဲ ဒီတစ်ခါအလှဆုံးဟုမင်းသစ်ထင်မိသည်။ ဖြူငယ့်မျက်နှာလေးက တစ်ခုခုကိုစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသလိုကြည်လင်နေသဖြင့် မင်းသစ်အားတက်သွားကာ စကားတွေတရစပ်ပြောမိတော့သည်။
“ဖြူလေး..စာမေးပွဲဖြေနိုင်တယ်မလား…ဖြူလေးက တော်ပြီးသားပဲ..ဖြေနိုင်မှာကိုကိုသိပါတယ်….. ဒါပေမဲ့ စာမေးပွဲနီးမှ စိတ်အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်ရတာကို ကိုကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်…..နောက်ဒီလိုမဖြစ်စေရပါဘူးဖြူလေးရယ်… ဖြူလေးကသာ ကိုယ့်လက်ကိုမြဲမြဲဆုပ်ကိုင်ထားရင် ကိုယ့်ဖြူလေးကိုတစ်သက်လုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမှာ… ပြီးတော့……..” ဖြူငယ်က လက်တစ်ဖက်ထောင်ပြလိုက်သဖြင့် မင်းသစ်စကားများလေထဲတွင်ရပ်တန့်သွားရသည်။ ဖန်ခွက်ထဲကို ရေအနည်းငယ်ထည့်ကာ သောက်လိုက်ရင်း ဖြူငယ် သည် သူမရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာသိမ်းထားခဲ့ရသော ရင်ထဲက စကားများကို စပြောတော့သည်။ “ကိုမင်းသစ်…ရှင့်ကိုရှင်စာမေးပွဲလာဖြေတယ်ထင်လို့စကားတွေဒီလောက်ပြောနေတာလား……. ရှင်စာမေးပွဲဖြေခဲ့ပြီးပြီလေ…အခု result ကိုပြောပြဖို့ ကျွန်မက လာတာ…… တကယ်တမ်းပြောရရင် ရှင့်အချစ်ကို ကျွန်မယုံပါတယ်…… ရှင်အခုချိန်မှာ ကျွန်မကိုအချစ်ဆုံးပဲ လက်ထပ်ပါလို့ပြောရင်လည်း လက်ထပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ကျွန်မသိတယ်…… ဒါပေမဲ့ရှင့်ရဲ့ အဲဒီ့အချစ်စိတ်က တစ်သက်လုံးရှိနေမှာလား……ကျွန်မတော့မထင်ပါဘူး…. ရှင့်အချစ်က ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ supermarket တွေမှာတင်တဲ့ ကုန်ဆုံးရက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ စားစရာတွေလိုပါပဲ… သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းမစားရင် ပုပ်သိုးသွားမှာပဲ… အခုလည်း ဒီအချိန်မှာ ကျွန်မရှင့်ကိုလက်မထပ်လိုက်ရင် နောက်ကိုမသေချာတော့ဘူး…….. ဥပမာ ကျွန်မနိုင်ငံခြားထွက်သွားမယ် ဒါမှမဟုတ် ရှင်နဲ့တစ်နှစ်တန်သည် နှစ်နှစ်တန်သည် ခွဲနေပြီး အလုပ်လုပ်မယ်…….. အဲလိုသာဆိုရင် ကျွန်မအဖြစ်ကမဆွီတီ့လိုပဲဖြစ်သွားအုံးမှာပဲ… ရှင် ငြင်းချင်သေးလား……မငြင်းနဲ့ကိုမင်းသစ်….. ရှင်နဲ့မဆွီတီ ပြန်ဖြစ်ကြသေးတယ်ဆိုတာလည်း ကျွန်မသိတယ်… ကျွန်မကတော့သူ့လိုမိန်းမမျိုးမဟုတ်ဘူး…….ကိုယ့်ကိုမချစ်လို့ ဒုတိယလူဆိုတာပေါ်လာတာ…ကိုယ့်ကိုမချစ်လို့ ပထမလူနေရာအဖြစ်တွန်းပို့ခံရတာ…….. အဲဒါမျိုးကျွန်မလက်မခံနိုင်ဘူး…….. ပြိုင်လုဖို့လည်းစိတ်မ၀င်စားဘူး.. ဒီတော့ရှင့်ကိုချစ်တဲ့ မဆွီတီဆီကိုသာ သွားပါတော့….. “ ပြောပြီးမောသွားဟန်ဖြင့် ဖြူငယ်ရေထပ်သောက်လိုက်သည်။ မင်းသစ်၏မျက်လုံးများက ဖြူငယ့်ကိုစိုက်ငေးကာ ပါးစပ်များက အံ့သြတာလား တစ်ခုခုကိုပြောချင်တာလားမသိ အနည်းငယ်ပွင့်ဟနေ၏။ ထို့နောက်သူစဉ်းစားထားသော စကားများကိုပြောဖို့ကြိုးစားနေဆဲပင် ဖြူငယ်ထကာထွက်သွားလေပြီ။ သူနောက်ကပြေးလိုက်ကာ ရှင်းပြတောင်းပန်သေးသော်လည်း ထပ်နှောက်ယှက်ရင် သူမအကိုနှင့်တိုင်လိုက်မည်ဟု ပြောကာလှည့်ထွက်သွား၏။
ဖြူငယ်သည် မင်းသစ်ကို ၀တ်လာခဲ့သောဂါဝန်အရောင်အတိုင်းစိမ်းကားသွားခဲ့လေပြီ။ ဖြူငယ်ကန်ဘောင်ပေါ်ရောက်တော ကျော်ကျော်က မရောက်သေးပါ။ ဆယ်မိနစ်လောက်ကြာမှ အပြေးအလွှားရောက်လာသည်။ “ဆောရီး ဆောရီး မိဖြူ တော်တော်စောင့်လိုက်ရလား…..ငါဝယ်စရာလေးရှိလို့ကြာသွားတာပါဟာ” ဖြူငယ်ကဖွဖွပြုံးပြရင်း ခေါင်းရမ်းလိုက်သည်။ “ကျော်ကျော် နင်စာမေးပွဲဖြေနိုင်ရဲ့လား” “အေး မဆိုးပါဘူးဟာ အောင်တော့အောင်မှာပါ အဟီး….ဒါနဲ့ ငါပြောထားတဲ့ကိစ္စလေးဆွေးနွေးရအောင်လေ” ကျော်ကျော်က စပ်ဖြဲဖြဲဖြင့်စကားစလိုက်တော့… “အေးပါဟာ…ငါလည်းအဲဒါပြောချင်လို့ နင့်ကိုချိန်းတာပဲကို……. ငါပြောတာသေချာနေားထောင်ကျော်ကျော်… အရင်ဆုံးငါပြောချင်တာက …. နင်နဲ့မတွေ့ခင်ကပဲ ကိုမင်းသစ်နဲ့ ငါလမ်းခွဲခဲ့ပြီးပြီ…… ငါအရင်က သူနဲ့လမ်းခွဲဖို့ကို တွေဝေနေခဲ့မိတယ်…..အချစ်ဦးမို့အရမ်းချစ်ခဲ့မိတာလည်းပါတယ်…နောက်ပြီး မိန်းကလေးတွေသဘာဝ ကိုယ်နဲ့ ကျူးကျူးလွန်လွန်ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ချစ်သူကို တော်ရုံနဲ့လမ်းခွဲဖို့မစဉ်းစားချင်တာလည်းပါတယ်….ဒါပေမဲ့ နင်ပြောခဲ့ဖူးသလိုပဲ ငါသူရွေးချယ်တာကိုမခံတော့ဘူးကျော်ကျော်…. ငါ့ကံကြမ္မာကိုငါပဲစီရင်မယ်…… ဒီနေ့ကစပြီး သူနဲ့ဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုလည်း မေ့လိုက်တော့မယ်…….” ဖြူငယ်ပြောရင်းက ခေါင်းကိုငုံ့လိုက်ရင်း ပြုံးစိစိဖြင့် “ဒါပေမဲ့ နင်နဲ့ဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုတော့ငါမေ့လို့ရမယ်မထင်ဘူး” ကျော်ကျော်မျက်နှာမှာ ၀င်းပသွားပြီး တစ်ခုခုပြောရန် ပါးစပ်ဟလိုက်သော်လည်းဖြူငယ်ကပင်ဆက်ပြောသည်။ “ဒါပေမဲ့ ငါနင့်ကိုချစ်မချစ်ဆိုတာလည်းမသေချာဘူးဟာ…….. ဒီရက်ပိုင်းစိတ်တွေလည်းရှုပ်နေတော့ ငါသေချာစဉ်းစားလို့မရဘူး….အချိန်ယူဖို့လိုတယ်…..အဲဒီ့အချိန်က တစ်လလည်းဖြစ်နိုင်တယ် တစ်နှစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်…. အဲဒီ့ထက်လည်းပိုကြာချင်ကြာမယ်…..ဒါပေမဲ့နင့်ကိုငါကြိုးရှည်ရှည်နဲ့လှန်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး….နင်စောင့်နိုင်တာမစောင့်နိုင်တာနင့်သဘောပဲ…….. မစောင့်နိုင်တော့လို့ မိန်းမတွေဘာတွေယူသွားခဲ့ ရင်လည်းငါအပြစ်မပြောပါဘူး…….. “ ဖြူငယ့်စကားဆုံးတော့ကျော်ကျော်သက်ပြင်းချသည်။
“ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့ ဘယ်စောင့်ချင်မလဲဟာ…ဒါပေမဲ့ ဘယ်တတ်နိုင်မှာလဲ…. ငါကချစ်တဲ့သူဆိုတော့ စောင့်ရမှာပေါ့…….ငါ့အချစ်ကခဏလေးအတွက်မဟုတ်တာသေချာတယ်..ဒါပေမဲ့ နင်ငါ့ကိုအဆက်အသွယ်တော့ လုံးလုံးဖြတ်မထားပါနဲ့ဟာ…. ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကိုတွေ့ချင်မြင်ချင်စိတ်လေးတော့ငါ့မှာရှိတာပေါ့..့ ” ကျော်ကျော်သူ့နံဘေးက စက္ကူအိတ်လေးကိုယူရင်း ပစ္စည်းတစ်ခုကို ထုတ်ယူလိုက်သည်။ “နင်ဒီလိုပြောမယ်ဆိုတာတော့ငါကြိုမသိခဲ့ဘူးပေါ့ဟာ…ဒါပေမဲ့ နင်ငါ့ကိုလက်ခံသည်ဖြစ်စေ ငြင်းသည်ဖြစ်စေ ငါနင့်ကိုအချိန်တိုင်းချစ်နေမယ်ဆိုတဲ့ အထိမ်းအမှတ်နဲ့ ဒါလေးကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့ဝယ်လာတာ…” ဘူးလေးကို ဖွင့်လိုက်တော့ လှပသောနာရီလေးတစ်လုံးထွက်လာသည်။ “အခုတော့ ဒီနာရီလေးက နင်ချစ်လာမဲ့အချိန်ကိုငါအမြဲစောင့်နေပါ့မယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟာ” ကျော်ကျော် မျက်နှာငယ်လေးနှင့်ပြောပြီး ဖြူငယ့်ကိုနာရီလေးလှမ်းပေးလိုက်သည်။ ဒီလိုဆိုတော့လည်းကျော်ကျော့်ကိုသူမသနားမိသည်။ သို့သော်ကြုံခဲ့ဖူးသောအတွေ့အကြုံများအရ ဘယ်ယောက်ျားကိုမှ ဖြူငယ်မယုံချင်တော့ပါ။ မင်းသစ်နှင့် ဆွီတီတို့ တိုက်ခန်းမှအဖြစ်အပျက်တွေကို ဆွီတီကိုယ်တိုင် သူမကိုဖုန်းဆက်ပြီးပြောပြခဲ့သည်။ မင်းသစ်နှင့်ကျော်ကျော် တစ်ယောက်ယောက်ကို ရွေးရန် စဉ်းစားခဲ့သော်လည်းလတ်တလောအခြေအနေအရ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာနေလိုသော သူမအတွက်သာ သူမကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏….ပြီး။